လွတ်လပ်သောအာရှအသံ၊ အင်တာနက် စာမျက်နှာ သုံးစွဲခြင်း စည်းမျဉ်းများ
| RFA အကြောင်း
လွတ်လပ်သောအာရှအသံ၊ အင်တာနက် စာမျက်နှာ သုံးစွဲခြင်း စည်းမျဉ်းများ (ဤ စည်းမျဉ်းများသည် ၂၀၀၅ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၂၆ ရက်နေ့မှ စတင်အကျုံးဝင်သည်။)
(ဤ စည်းမျဉ်းများသည် ၂၀၀၅ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၂၆ ရက်နေ့မှ စတင်အကျုံးဝင်သည်။)
စည်းမျဉ်းများကို သဘောတူခြင်း လွတ်လပ်သောအာရှအသံ၊ အင်တာနက်စာမျက်နှာတွင် ဖော်ပြထားသည့် အကြောင်းအရာ၊ အချက် အလက်၊ ဆောင်းပါးများအား အသုံးမပြုမီ ဤစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအား ကြိုတင်ဖတ်စေလိုပါသည်။
ဤစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများသည် RFA Message Boards၊ Podcasting နှင့် RSS Feed များအား သုံးစွဲမှုများအားလုံးနှင့်အကြုံးဝင်သည်။ (အားလုံးကိုခြုံငုံ၍ လွတ်လပ်သောအာရှအသံ အင်တာနက် စာမျက်နှာ သို့မဟုတ် ဌာနဟုသုံးသွားမည်။)
လွတ်လပ်သောအာရှအသံအင်တာနက် စာမျက်နှာကိုသုံးစွဲသည်နှင့်တပြိုင်နက် ထိုသုံးစွဲသူသည် ဤစည်းမျဉ်းများကိုလိုက်နာရန်သဘောတူသည်ဟု သတ်မှတ်သည်။ လိုအပ်ပါက ဌာနအနေနှင့် ဤစည်းမျဉ်းများကို အချိန်မရွေးပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်ခွင့်ရှိသည်။ ထိုသို့ပြင်ဆင် ဖြည့်စွက်သည်များကိုလည်း လွတ်လပ်သောအာရှအသံအင်တာနက်စာမျက်နှာ၌ ဖော်ပြပေးသွားမည်။
ထိုသို့ဖော်ပြပြီးသည်နှင့်တပြိုင်နက် ထိုပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်ချက်များသည် အတည်ဖြစ်ပြီး အင်တာနက် စာမျက်နှာသုံးစွဲသူအနေနှင့် ထိုအချက်များအား လိုက်နာဖို့သဘောတူသည်ဟု သတ်မှတ်သည်။
မူပိုင်ခွင့် လွတ်လပ်သောအာရှအသံအင်တာနက်စာမျက်နှာပါ အကြောင်းအရာများအား အမေရိကန်အစိုးရ မူပိုင် ခွင့်ဥပဒေ၊ နိုင်ငံတကာမူပိုင်ခွင့်ဥပဒေများနှင့်အညီ အကာအကွယ်ပေးထားသည်။ လွတ်လပ်သော အာရှအသံအင်တာနက်စာမျက်နှာ၌ စာအားဖြင့်ရေးသားဖော်ပြထားသည့် အကြောင်းအရာများအား ဖြန့်ဝေခြင်း၊ ပြန်လည်ထုတ်ဝေခြင်း၊ ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းများကို ကြိုဆိုခွင့်ပြုသည်။ သို့သော် ထိုသို့ အသုံးပြုလျှင် လွတ်လပ်သောအာရှအသံပိုင်အကြောင်းအရာများဖြစ်ကြောင်း အောက်ပါအတိုင်း ရည်ညွှန်းဖော် ပြရမည်။
Copyright 2006, RFA. Reprinted with the permission of Radio Free Asia, 2025 M St. NW, Suite 300, Washington DC 20036. http:/ / www.rfa.org လွတ်လပ်သောအာရှအသံ အင်တာနက်စာမျက်နှာမှ သတင်း၊ ဆောင်းပါးစသည်တို့ကို တခုလုံး မဟုတ်ပဲ တစိတ်တပိုင်းကို ကောက်နှုတ်အသုံးပြုခြင်းဖြစ်လျှင် “ကောက်နှုတ်ချက်” မျှသာဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြအသိပေးရမည်။ ထို့အပြင် ထိုကောက်နှုတ်ချက်သည် တပုဒ်လုံး၏မူရင်းအာဘော်အား ပြောင်းလဲသွားစေခြင်း၊ အဓိပ္ပါယ်ကောက်လွဲမှားသွားအောင် ဖန်တီးခြင်းများမပြုလုပ်ရ။
အထူးသတိပြုရန်မှာ လွတ်လပ်သောအာရှအသံအင်တာနက်စာမျက်နှာတွင်ဖော်ပြထားသည့် ဌာန ၉ ခုစလုံး၏ မည်သည့်အသံ၊ မည်သည့်အစီအစဉ်၊ မည်သည့်ဓါတ်ပုံ၊ ဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်း၊ ဗီဒီယိုများကိုမျှ ခွင့်ပြုချက်မယူပဲ ထုတ်လွှင့်ဖော်ပြခြင်း၊ ပြန်လည်ထုတ်လွှင့်ဖော်ပြခြင်းများကိုမဆို ပြင်းထန်စွာတားမြစ်ပိတ်ပင် သည်။
လွတ်လပ်သောအာရှအသံ၏ အမှတ်တံဆိပ် Radio Free Asia ( RFA) နှင့် RFA အစီအစဉ်အမည်များသည်၊ RFA ဌာန၏ အမှတ်တံဆိပ်များ ဖြစ်ပြီး၊ လွတ်လပ်သောအာရှအသံ၏ မူပိုင်ဖြစ်သည်။ လွတ်လပ်သောအာရှအသံထံမှ၊ စာအား ဖြင့်ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက် မရရှိပဲနှင့်၊ လွတ်လပ်သောအာရှအသံ၏ မည်သည့် သင်္ကေတ၊ အမှတ်တံဆိပ် နှင့် ဂရပ်ဒီဇိုင်းများကိုမျှ၊ သုံးစွဲခြင်း မပြုလုပ်ရ။
သို့ရာတွင်၊ RSS Feeds များပါဝင်သည့် လွတ်လပ် သောအာရှအသံတံဆိပ်ကိုမူ အသုံးပြုနိုင်သည်။ သိုပေသော်ထိုသို့အသုံးပြုရာ၌ ရှေ့တွင်ဖော်ပြသွားမည့် လွတ်လပ်သောအာရှအသံ RSS Feeds ဆိုင်ရာအကူအညီများနှင့်ဖြစ်ရမည်။
မိမိ၏ ကိုယ်ပိုင်အင်တာနက် စာမျက်နှာများတွင် ထည့်သွင်းဖော်ပြမှု လွပ်လပ်သောအာရှအသံအင်တာနက်စာမျက်နှာအား ၄င်း၏ကိုယ်ပိုင် အင်တာနက်လိပ်စာမပေါ်စေပဲ၊ မိမိကိုယ်ပိုင်အင်တာနက်စာမျက်နှာ လိပ်စာဘောင်အတွင်း သွတ်သွင်းအသုံးပြုခြင်းမျိုးကို ခွင့်မပြု။
လွတ်လပ်သောအာရှအသံ အင်တာနက်စာမျက်နှာကို ဆက်သွယ်ခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လွတ်လပ်သောအာရှအသံသည် အမြင့်မားဆုံးသတင်းအဆင့်အတန်းနှင့် သတင်းကျင့်ဝတ်များကို လိုက်နာကျင့်သုံးသော၊ လွတ်လပ်သော၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည်။
လွတ်လပ်သောအာရှအသံ အင်တာနက်စာမျက်နှာအား ၀င်ရောက်ဆက်သွယ်ခွင့်ပေးခြင်းသည်
၁။ လူပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်၊ အဖွဲ့အစည်းတစုံတခု၏ဦးတည်ချက်၊ အတွေးအခေါ်၊ ၄င်း၏အင်တာ နက်စာမျက်နှာ၊ နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှု၊ တင်ပြချက်များနှင့် လုပ်ငန်းဆောင်တာများအား လွတ်လပ်သော အာရှအသံက ထောက်ခံမှုပေးသည် ကြော်ငြာပေးသည်ဟူသည့်သဘော မသက်ရောက်စေရ။
၂။ လွတ်လပ်သောအာရှအသံ အင်တာနက်စာမျက်နှာပါအကြောင်းအရာများကို စီးပွားရေးရည်ရွယ် ချက်အတွက် အသုံးမပြုရ။
လွတ်လပ်သောအာရှအသံ၏ မည်သည့်အင်တာနက်စာမျက်နှာကိုမဆို ၀င်ရောက်ကြည့်ရှုခွင့်အား လွတ်လပ်သောအာရှအသံအနေဖြင့် ပြန်လည်ရုတ်သိမ်းပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
လွတ်လပ်သောအာရှအသံ အင်တာနက်စာမျက်နှာ၌ ဖော်ပြထားသော အခြားအင်တာနက်စာမျက်နှာများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လွတ်လပ်သောအာရှအသံ၊ အင်တာနက်စာမျက်နှာ၌ အခြားအင်တာနက်စာမျက်နှာအဆက်အသွယ် များကိုဖော်ပြပေးထားသည်။ ထိုစာမျက်နှာများသည် လွတ်လပ်သောအာရှအသံနှင့်လုံးဝပတ်သက်မှု မရှိပါ။ ၄င်းအပြင် ထိုအင်တာနက်စာမျက်နှာပါအကြောင်းအရာ၊ စီစဉ်ထုတ်လုပ်သူ၊ အစီအစဉ်များနှင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများအား လွတ်လပ်သောအာရှအသံက သဘောတူထောက်ခံမှုမရှိပါ။
ထိုစာမျက်နှာများ၏အကြောင်းအရာ၊ စီစဉ်ထုတ်လုပ်သူ၊ အရည်အသွေး၊ ကြော်ငြာ၊ ထုတ်လုပ်မှု၊ လုပ်ငန်းဆောင်တာများအပါအ၀င် ဖော်ပြထားသည့်တခြားကိစ္စရပ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လွတ်လပ်သော အာရှအသံ၌ စိုးစဉ်းမျှတာဝန်မရှိပါ။
ထိုအင်တာနက်စာမျက်နှာများတွင်ဖော်ပြထားသည့်၊ သို့မဟုတ် ထိုစာမျက်နှာများမှတဆင့်ဖော်ပြထား သည့် အကြောင်းအရာများ၊ ထုတ်လုပ်တင်ပြချက်များနှင့် ၀န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများအား အသုံးပြုရာမှ တဆင့် ပေါ်ထွက်လာသည့် သို့မဟုတ် ပေါ်ထွက်လာသည်ဟု စွပ်စွဲခံရသည့်၊ မည်သည့် အပျက်အစီး။ ဆုံးရှုံးမှုများနှင့် ပတ်သက်၍လည်း တိုက်ရိုက်သော်လည်းကောင်း၊ သွယ်ဝိုက်၍သော်လည်းကောင်း လွတ်လပ်သောအာရှအသံ၌တာဝန်မရှိပါ။
RSS Feeds နည်းဖြင့် သတင်းများတိုက်ရိုက်ရယူသည့်ကိစ္စ www.rfa.org/ rss/ index.html လိပ်စာမှတဆင့် RSS Feed များရယူနိုင်အောင် လွတ်လပ်သော အာရှအသံက အထူးတလည်စီစဉ်ပေးထားပါသည်။ လွတ်လပ်သောအာရှအသံ RSS Feed များတွင် သတင်းခေါင်းစဉ်များ၊ အကျဉ်းချုပ်များနှင့် သတင်းတပုဒ်လုံးကိုဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။ ထို RSS Feed အားလုံးကို လွတ်လပ်သောအာရှအသံကပိုင်ဆိုင်သည်။
လွတ်လပ်သောအာရှအသံ RSS Feeds မှာဖော်ပြထားသည့် အကြောင်းအရာ အချက်အလက်တစိတ် တပိုင်းကိုဖြစ်စေ၊ သို့မဟုတ် လွတ်လပ်သောအာရှအသံ RSS Feeds ကိုဝင်ရောက်ဖတ်ရှုနိုင်သည့် လိပ်စာကိုဖြစ်စေ၊ တဆင့်ထပ်မံဖော်ပြနိုင်သည်။
သို့ရာတွင် အောက်ဖော်ပြပါအချက်များနှင့် ညီညွတ်မှသာလျှင် ဖော်ပြနိုင်ခွင့်ရှိသည်။
- ဖော်ပြထားသောလွတ်လပ်သောအာရှအသံ၊ RSS Feeds လိပ်စာများသည် လွတ်လပ်သော အာရှအသံအင်တာနက်စာမျက်နှာသို့ တိုက်ရိုက်ရောက်ရှိနိုင်ရမည်။
- လွတ်လပ်သောအာရှအသံ၊ RSS Feeds မှရယူသည့် အချက်အလက်များအား တဆင့်ပြန် လည်အသုံးပြုခြင်း၊ ဖော်ပြခြင်းအားဖြင့် လူပိုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်၊ အဖွဲ့အစည်းတစုံတခု၏ ဦးတည်ချက်၊ အတွေးအခေါ်၊ အင်တာနက်စာမျက်နှာ၊ အစီအစဉ်များနှင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု ကို လွတ်လပ်သောအာရှအသံကထောက်ခံသည်၊ မြှင့်တင်ပေးသည်ဆိုသည့်သဘောမသက် ရောက်စေရ။
- လွတ်လပ်သောအာရှအသံ၊ RSS Feeds ၌ ဖော်ပြထားသည့် ခေါင်းစဉ်နှင့်အကျဉ်းချုပ်များအပါ အ၀င်၊ အကြောင်းအရာတခုလုံး၏ မူရင်းအဓိပ္ပါယ် အနှစ်သာရများအားပြောင်းလဲပစ်ခြင်း၊ အဓိပ္ပါယ်အကောက်မှားအောင် ဖန်တီးခြင်းများ မပြုလုပ်ရ။
- လွတ်လပ်သောအာရှအသံ၊ RSS Feeds မှတဆင့်ရယူထားသော သတင်းနှင့် အခြားအကြောင်းအရာများကို ပြင်ဆင်၊ ဖြည့်စွက်၊ ပြောင်းလဲခြင်းများ မပြုလုပ်ရ။
လွတ်လပ်သောအာရှအသံ၊ အင်တာနက်စာမျက်နှာကို သုံးစွဲခြင်း လူပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်အနေနှင့် လွတ်လပ်သောအာရှအသံ RSS Feeds ပါ အကြောင်းအရာ အချက်အလက်များကို ၄င်း၏ကိုယ်ပိုင်အင်တာနက်စာမျက်နှာတွင်ဖော်ပြမည်ဆိုလျှင် “လွတ်လပ် သောအာရှအသံ” နာမည်ကိုထည့်သွင်းဖော်ပြရမည်။ ထို့အပြင် “လွတ်လပ်သောအာရှအသံ၏ သတင်းခေါင်းစဉ်များ” ဟုလည်းဖော်ပြရမည့်အပြင်၊ RSS Feeds တွင်ဖော်ပြထားသော လွတ်လပ် သောအာရှအသံ၏ သင်္ကေတတံဆိပ်ကိုလည်း ဖော်ပြရမည်။ သို့သော် တစုံတရာကိုမျှ ပြုပြင် ပြောင်းလဲမှုမလုပ်ရ။
အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်ကိစ္စရပ်မျိုးမှလွဲ၍ လွတ်လပ်သောအာရှအသံ၏ မူပိုင်ခွင့်သင်္ကေတ၊ သို့မဟုတ် လွတ်လပ်သောအာရှအသံ၏အမှတ်အသားများ၊ လွတ်လပ်သောအာရှအသံ RSS Feed များအား တခြားကိစ္စရပ်များ၌ အသုံးပြုခြင်းကိုလည်း ပြင်းထန်စွာတားမြစ်သည်။ လွတ်လပ် သောအာရှအသံ RSS Feeds မှတဆင့်ရယူထားသော သတင်းနှင့်အခြားအကြောင်းအရာများကို အသုံးပြုမည်ဆိုလျှင် ဤစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများပါမူပိုင်ခွင့်အခန်းကို ဖတ်ရှုစေလိုပါသည်။
လွတ်လပ်သောအာရှအသံအနေဖြင့် RSS Feeds စီစဉ်ပေးထားခြင်းကို အချိန်မရွေးရပ်ဆိုင်းနိုင် ခွင့်ရှိသည်။ ထို့အပြင်လူတဦးတယောက်က လွတ်လပ်သောအာရှအသံ RSS Feeds များကို ဆက်သွယ်ခွင့်၊ အသုံးပြုခွင့်၊ လွတ်လပ်သောအာရှအသံ RSS Feeds ပါအကြောင်းအရာများအား အသုံးပြုခွင့် သို့မဟုတ် လွတ်လပ်သောအာရှအသံ၏ မူပိုင်ခွင့်တံဆိပ်အသုံးပြုခွင့်များကိုလည်း လွတ်လပ်သောအာရှအသံအနေနှင့် အချိန်မရွေးရပ်ဆိုင်းနိုင်ခွင့်ရှိသည်။
၁။ သူတပါးဂုဏ်သိက္ခာညှိုးနွမ်းစေသော၊ မမှန်ကန်သော၊ ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်စေနိုင်သော၊ ညစ်ညမ်းသော၊ မဖွယ်မရာဖြစ်သော၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ နှိုးဆွသော၊ အကြမ်းဖက်သော၊ အလွဲသုံး စားလုပ်သော၊ ခြိမ်းခြောက်သော၊ မတရားပြုကျင့်သော၊ ခွဲခြားနှိမ်ချဆက်ဆံသော၊ လူမျိုးခွဲခြား စိတ်ရှိသော၊ ယုတ်ရင်းကြမ်းတမ်းသော၊ သူတပါးအခွင့်အရေးကို ကျူးကြော်ထိပါးသော၊ ဥပဒေ ချိုးဖောက်သော၊ အမုန်းစိတ်ပွားစေမည့်အရေးအသားများပါဝင်သော၊ အရွယ်မရောက်သေးသူများ အားတနည်းနည်းဖြင့် ထိခိုက်စေနိုင်သော အရေးအသား၊ အကြောင်းအရာ၊ ဓါတ်ပုံ၊ ဗွီဒီယို အစရှိ သည်များကို လွတ်လပ်သောအာရှအသံ Message Boards သို့ မပေးပို့ရ။
၂။ လွတ်လပ်သောအာရှအသံ Message Boards ကိုဆက်သွယ်ရာ၌ လွတ်လပ်သောအာရှအသံ ၏ အရာရှိများ၊ ၀န်ထမ်းများအပါအ၀င် တခြားလူပိုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်၊ အဖွဲ့အစည်းတစုံတခု အဖြစ် အယောင်ဆောင်ဆက်သွယ်မှုမျိုး မလုပ်ရ။ ( ဥပမာ..မိမိကိုယ်ပိုင်အမည်နှင့် အီးမေးလ်လိပ် စာကိုမသုံးပဲ တခြားသူတဦးဦး အဖွဲ့အစည်းတခုခု၏ အမည်နာမနှင့် အီးမေးလ်လိပ်စာကို သုံးစွဲမှု မျိုး။)
၃။ အီလက်ထရောနစ်နည်းလမ်းဖြင့် ဖြန့်ချီနိုင်ခွင့်ရှိသည်ဆိုသော မူပိုင်ခွင့်၊ သို့မဟုတ် အခြား အလားတူ ခွင့်ပြုချက်တစုံတရာရှိမှသာလျှင်၊ အကြောင်းအရာ အချက်အလက်များကို လွတ်လပ် သောအာရှအသံ Message Boards သို့ ပေးပို့နိုင်သည်။
မူပိုင်ခွင့်၊ အမှတ်တံဆိပ်၊ အဖွဲ့အစည်း သို့မဟုတ် ကုမ္ပဏီတခုခု၏ လျှို့ဝှက်ကိစ္စ၊ တသီးပုဂ္ဂလ လွတ်လပ်ခွင့်၊ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ၊ အများစိတ်ဝင်စားမှု၊ ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် မူပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် ယုံကြည်အပ်နှင်းမှုဆိုင်ရာများနှင့်စပ်လျှဉ်း၍ လိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းဥပဒေများ ( ဥပမာ..လျှို့ဝှက်အဖြစ်ထိမ်းသိမ်းရမည့်အချက်အလက်များ၊ သို့မဟုတ် ကုမ္ပဏီလျှို့ဝှက်ကိစ္စများ) အပါအ၀င် လွတ်လပ်သောအာရှအသံ အင်တာနက်စာမျက်နှာတွင် ဖော်ပြထားသော တခြားအင် တာနက်စာမျက်နှာများ၏ အခွင့်အရေးနှင့် စည်းမျဉ်းများကိုချိုးဖောက်ခြင်း၊ ထိုစာမျက်နှာများပါ အကြောင်းအရာများကို ခိုးယူ၊ ကူးချပြီး မိမိကိုယ်ပိုင်အဖြစ်ဖော်ပြခြင်းမျိုး မပြုလုပ်ရ။
လွတ်လပ်သောအာရှအသံ Message Boards သို့ပေးပို့သောအကြောင်းအရာများသည် မိမိကိုယ်ပိုင် သော်လည်းကောင်း၊ သို့မဟုတ် အများပိုင် (အများပြည်သူသုံးခွင့်ရှိသော အကြောင်းအရာအချက် အလက်မျိုး) သော်လည်းကောင်း ဖြစ်ရမည်။ ဤအချက်ကို လွတ်လပ်သောအာရှအသံ အင်တာနက် စာမျက်နှာ အသုံးပြုနေသူအနေဖြင့် သဘောတူသည်၊ လိုက်နာရန်ဂတိပြုသည်ဟုသတ်မှတ်သည်။
မည်သည့်ဂီတကိုမှ လွတ်လပ်သောအာရှအသံ Message Boards သို့မဟုတ် လွတ်လပ်သောအာရှ အသံအခြားဌာနများသို့ မပေးပို့ရ။
၄။ လွတ်လပ်သောအာရှအသံ အင်တာနက်စာမျက်နှာပါ အကြောင်းအရာများအား စီးပွားရေးလုပ်ငန်း နှင့်မသက်ဆိုင်သည့် ကိစ္စများ၌သာလျှင် သုံးစွဲခွင့်ရှိသည်။ အလှူခံခြင်း၊ ရန်ပုံငွေတောင်းခံခြင်း၊ ကုန်ပစ္စည်းနှင့် ၀န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများအား ထောက်ခံချက်ပေးခြင်း၊ ယုံကြည်လက်ခံလာအောင် ကြိုးပန်းခြင်း၊ ကြော်ငြာပေးခြင်း စသည့်ကိစ္စရပ်မျိုးပါဝင်နေသော အကြောင်းအရာများကို မဖြန့်ချီရ၊ မပေးပို့ရ။
၅။ Virus သို့မဟုတ် အလားတူ ပျက်စီးစေနိုင်သော Code နှင့် တခြားအရာများကိုမပေးပို့ရ၊ လက် ဆင့်မကမ်းရ။ ရာဇ၀တ်မှုမြောက်သောအပြုအမူများကျူးလွန်အောင် သွေးဆောင်ရန်၊ တခြားတစုံ တဦးအဖြစ် အယောင်ဆောင်ရန်၊ Chain Letter များပေးပို့ရန်၊ အစုလိုက်အပြုံလိုက်စာများဖြန့်ဝေရန်၊ သို့မဟုတ် Spam များပေးပိုရရန် စသည့်ရည်ရွယ်ချက်များဖြင့် လွတ်လပ်သောအာရှအသံ အင်တာ နက်စာမျက်နှာအား အသုံးမချရ။ ထို့အပြင် Spam များပေးပို့ရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် လွတ်လပ်သော အာရှအသံ အင်တာနက်စာမျက်နှာသုံးစွဲသူ တခြားပုဂ္ဂိုလ်များ၏ အီးမေးလ်လိပ်စာများအား ရယူသုံးစွဲ ခြင်းမျိုး မပြုလုပ်ရ။
၆။ လွတ်လပ်သောအာရှအသံသို့ အကြောင်းအရာ၊ အချက်အလက်၊ အသံ၊ ဗွီဒီယိုများပေးပို့လာလျှင် ထိုအရာများအားသုံးစွဲခွင့်လိုင်စင်ကိုပါ လွတ်လပ်သောအာရှအသံသို့ တပါတည်းအပ်နှင်းလိုက်သည် ဟု မှတ်ယူသည်။
ထိုသုံးစွဲခွင့်လိုင်စင်အမျိုးအစားသည် အထူးသီးသန့်မဟုတ်သော၊ ဆက်တိုက်ဖြစ်သော၊ အခကြေးငွေ ပေးစရာမလိုသော၊ တကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ သုံးစွဲခွင့်လိုင်စင်မျိုးဖြစ်သည်။ ထိုသုံးစွဲခွင့်လိုင်စင်အရဆိုလျှင် အဆိုပါပေးပို့လာသောအကြောင်းအရာများကို သုံးစွဲခွင့်၊ မိတ္တူကူးခွင့်၊ ပြောင်းလဲပြင်ဆင်ခွင့်၊ တခြားသို့ ပေးပို့ခွင့်၊ မီဒီယာအားလုံးမှာ သိအောင်ဖော်ပြဆောင်ရွက်ခွင့်များကို လွတ်လပ်သောအာရှအသံအား ပေးအပ်သည်ဟု သတ်မှတ်သည်။
၇။ အသက် ၁၈ နှစ်အောက် ပုဂ္ဂိုလ်များအနေဖြင့် လွတ်လပ်သောအာရှအသံ Message Boards ကို အသုံးပြုလိုလျှင် မိဘအုပ်ထိမ်းသူ၏ခွင့်ပြုချက်ရရှိထားသူဖြစ်ရမည်။ အသက် ၁၃ နှစ်အောက်၊ အရွယ် မရောက်သေးသူများအနေဖြင့် လွတ်လပ်သောအာရှအသံ Message Boards ကိုသော်လည်းကောင်း၊ လွတ်လပ်သောအာရှအသံကိုသော်လည်းကောင်း မည်သည့်အကြောင်းအရာ အချက်အလက်မျှ ပေးပို့ ခွင့်မရှိ။ Messages Boards ၌လည်း ပါဝင်ဆွေးနွေးခွင့်မရှိ။
၈။ မိမိ၏ကိုယ်ပိုင်အီးမေးလ်လိပ်စာသုံး၍ လွတ်လပ်သောအာရှအသံ Message Boards သို့ အကြောင်းအရာများပေးပို့သူသည် ထိုအကြောင်းအရာများအားလုံးနှင့်ပတ်သက်၍ တဦးတည်းသော တာဝန်ရှိသူဖြစ်သည်။ လွတ်လပ်သောအာရှအသံအနေဖြင့် ပေးပို့လာသော အကြောင်းအရာဟူသမျှ ကို စစ်ဆေးစိစစ်ခြင်းပြုနိုင်မည်မဟုတ်သလို၊ ပြုမည်လည်းမဟုတ်ပါ။
လွတ်လပ်သောအာရှအသံ Message Boards သို့ပေးပို့လာသော အကြောင်းအရာများနှင့်ပတ်သက်၍ လွတ်လပ်သောအာရှအသံ၌ လုံးဝတာဝန်မရှိဆိုသောအချက်ကို အသုံးပြုသူက သဘောတူသည်ဟု သတ်မှတ်သည်။
လွတ်လက်သောအာရှအသံ Message Boards က ချမှတ်ထားသော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအား ချိုးဖောက်သည်ဟု ယူဆသတ်မှတ်လျှင်၊ သို့တည်းမဟုတ် လွတ်လပ်သောအာရှအသံက ချမှတ် ထားသော မူဝါဒများနှင့် ဆန့်ကျင်ဖီလာဖြစ်နေသည်၊ သို့တည်းမဟုတ် ငြင်းပယ်သင့်သည်ဟု ယူဆ သတ်မှတ်လျှင် (ထိုသို့ယူဆသတ်မှတ်ရန်၊ မသတ်မှတ်ရန်မှာ လွတ်လပ်သောအာရှအသံ၏ ကိုယ်ပိုင် အခွင့်အာဏာဖြစ်သည်။) လွတ်လပ်သောအာရှအသံအနေဖြင့် ထိုပေးပို့လာသော အကြောင်းအရာ များအား ဖျက်သိမ်းခွင့်နှင့် ရွှေ့ပြောင်းခွင့်ရှိသည်။ (တာဝန် မဟုတ်ပါ။ လုပ်ပိုင်ခွင့်ဖြစ်သည်။)
ဤအချက်ကို ပေးပို့သူအနေနှင့် သဘောတူသည်ဟု သတ်မှတ်သည်။
၉။ ထိုပေးပို့လာသောအကြောင်းအရာများ တိကျမှန်ကန်မှုရှိ၊ မရှိကို လွတ်လပ်သောအာရှအသံအနေ နှင့် စုံစမ်းစစ်ဆေးအတည်ပြုမပေးနိုင်ပါ။ ၄င်းအပြင် ထိုပေးပို့လာသောအကြောင်းအရာများအား မူပိုင် ခွင့်ရှိသူကသာပေးပို့သည်၊ သို့တည်းမဟုတ် မူပိုင်ခွင့်ရှိသူ၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်ပေးပို့သည်။ သို့တည်း မဟုတ် လွတ်လပ်သောအာရှအသံက ချမှတ်ထားသော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် ကိုက်ညီသည် ဟု လည်း လွတ်လပ်သောအာရှအသံက တာဝန်မခံပါ။
၁၀။ ချမှတ်ထားသော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအား ချိုးဖောက်မှုအပါအ၀င် မည်သည့်အကြောင်းနှင့် မဆို လွတ်လပ်သောအာရှအသံ Message Boards သုံးစွဲခွင့်အားကန့်သတ်နိုင်သည်။သို့တည်းမဟုတ် အပြီးတိုင် ရုတ်သိမ်းနိုင်သည့်အခွင့်အရေး လွတ်လပ်သောအာရှအသံ၌ရှိသည်ဟူသောအချက်ကို အသုံးပြုသူအနေနှင့် သိနားလည်ထားသည်ဟုသတ်မှတ်သည်။
လွတ်လပ်သောအာရှအသံ အင်တာနက်စာမျက်နှာသုံးစွဲသူအနေဖြင့် လိုက်နာရမည့်စည်းကမ်းများ လွတ်လပ်သောအာရှအသံ Message Boards အပါအ၀င် ၄င်း၏ အင်တာနက်စာမျက်နှာကို အသုံး ပြုသူသည်၊ သို့မဟုတ် www.rfa.org လိပ်စာမှတဆင့် ဆောင်းပါး၊ အီးမေးလ်၊ သို့မဟုတ် တခြား အချက်အလက်များပေးပို့သူသည် အောက်ဖော်ပြပါစည်းကမ်းများအား လိုက်နာရန်သဘောတူသည်၊ ကတိက၀တ်ပြုအာမခံသည်ဟု မှတ်ယူသည်။
၁။ လွတ်လပ်သောအာရှအသံ အင်တာနက်စာမျက်နှာ Message Boards သို့ပေးပို့သောအကြောင်း အရာ အချက်အလက်များသည်၊ သို့တည်းမဟုတ် လွတ်လပ်သောအာရှအသံ အင်တာနက်စာမျက်နှာ သို့ဖြစ်စေ ၄င်းမှတဆင့်ဖြစ်စေ ပေးပို့လာသော အကြောင်းအရာအချက်အလက်များသည် လွတ်လပ် သော အာရှအသံကချမှတ်ထားသော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို မချိုးဖောက်ပါ၊ ချိုးဖောက်မည် မဟုတ်ပါ။
၂။ လွတ်လပ်သောအာရှအသံ အင်တာနက်စာမျက်နှာသုံးစွဲမှုဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီ လိုက်နာဆောင်ရွက်ပါမည်။
၄င်းအပြင် အောက်ဖော်ပြပါ အချက် ၄ ချက်ကြောင့် ပေါ်ပေါက်လာရသော ဥပဒေငြိစွန်းမှုများအတွက် ပေးဆပ်ရမည့် ငွေကြေး၊ တန်ဖိုး၊ ကုန်ကျစရိတ် (ရှေ့နေခအပါအ၀င်) များကို မိမိဘာသာမိမိ ပေး ဆောင်သွားရန်သဘောတူသည်။ ထိုငွေကြေးကိစ္စများ၊ တိုင်တန်းမှုများ၊ တာဝန်ရှိမှုများနှင့်ပတ်သက်၍ လည်း လွတ်လပ်သောအာရှအသံနှင့်တကွ ၄င်း၏ ညွှန်ကြားရေးမှုးများ၊ အရာရှိများ၊ ၀န်ထမ်းများ၊ အဖွဲ့ဝင်များနှင့် မူပိုင်ခွင့်ပိုင်ရှင်များအား ထိခိုက်နစ်နာစေမှု မရှိစေရ။
၁။ လွတ်လပ်သောအာရှအသံ အင်တာနက်စာမျက်နှာကို သုံးစွဲသူအနေဖြင့် မိမိကိုယ်တိုင် လိုက်နာ ပါမည်ဟု သဘောတူညီထားသော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအားချိုးဖောက်မှု
၂။ လွတ်လပ်သောအာရှအသံ အင်တာနက်စာမျက်နှာအားသုံးစွဲမှု
၃။ လွတ်လပ်သောအာရှအသံ အင်တာနက်စာမျက်နှာ Message Boards သို့ပေးပို့သောအကြောင်း အရာ အချက်အလက်များ၊ သို့တည်းမဟုတ် လွတ်လပ်သောအာရှအသံအင်တာနက် စာမျက်နှာသို့ ဖြစ်စေ ပေးပို့လာသောအကြောင်းအရာအချက်အလက်များ
၄။ ထိုအကြောင်းအရာ အချက်အလက်များအား လွတ်လပ်သောအာရှအသံက ဖြန့်ချီမှု၊ ဖြန့်ဝေမှုနှင့် အသုံးပြုမှု
လွတ်လပ်သောအာရှအသံအနေနှင့် မည်သည့်ကိစ္စများ၌ အာမခံကြာင်း၊ တိတိလင်းလင်းဖြစ်စေ၊ သွယ်ဝိုက်သောသဘောနှင့်ဖြစ်စေ၊ အကန့်အသတ်သဘော၊ သို့မဟုတ်ယေဘူယျသဘောဖြစ်စေ၊ တခြားမည်သည့်သဘောတခုခုဖြင့် ဖြစ်စေ၊ ဖော်ပြခဲ့သည်များရှိခဲ့လျှင်သော်မှ မည်သည့်အရာကို သော်မျှ လွတ်လပ်သောအာရှအသံအနေနှင့် အာမ မခံ၊ တာဝန်မယူကြောင်းသိစေအပ်ပါသည်။
လွတ်လပ်သောအာရှအသံ အင်တာနက်စာမျက်နှာကဖော်ပြပေးသည့် ၀န်ဆောင်မှုများသည် အရှိ၊ အရှိအတိုင်းမူဖြင့် ပံ့ပိုးပေးထားခြင်းဖြစ်သည်။ ၄င်း၏ စာမျက်နှာသည် အပြတ်အလပ်မရှိ စေရဟု လည်းကောင်း၊ အမှားကင်းစေရမည်ဟုလည်းကောင်းအာမ မခံပါ။
လွတ်လပ်သောအာရှအသံမှဖြစ်စေ၊ ၄င်း၏ အင်တာနက်စာမျက်နှာပေါ်တွင်ဖြစ်စေ၊ သို့မဟုတ် ၄င်းစာ မျက်နှာတွင် ဖော်ပြပေးထားသော တခြားအင်တာနက်စာမျက်နှာများမှတဆင့်ဖြစ်စေ၊ ကြည့်ရှုနားဆင် နိုင်သော အကြောင်းအရာအချက်အလက်များ၊ အယူအဆများ၊ ထုတ်လုပ်မှုများ၊ ၀န်ဆောင်မှုများ၏ အားထားလောက်မှု၊ တိကျမှန်ကန်မှုများနှင့်စပ်လျှဉ်း၍သော်လည်းကောင်း၊ လွတ်လပ်သောအာရှအသံ အင်တာနက်စာမျက်နှာကို ၀င်ရောက်အသုံးပြုမှုမှတဆင့် ပေါ်ပေါက်လာသည့် အကျိုးဆက်များနှင့် စပ်လျှဉ်း၍လည်းကောင်း မည်သည့်အရာကိုမျှ လွတ်လပ်သောအာရှအသံအနေဖြင့် တာဝန်မခံပါ။
လွတ်လပ်သောအာရှအသံ အင်တာနက်စာမျက်နှာအသုံးပြုရာတွင် ပေါ်ပေါက်လာနိုင်သည့် ဆိုးကျိုး များနှင့်ပတ်သက်၍ ၀င်ရောက်အသုံးပြုသူ၏တာဝန်သက်သက်သာဖြစ်သည်။
လွတ်လပ်သောအာရှအသံ အင်တာနက်စာမျက်နှာကို သုံးစွဲမှု၊ မသုံးစွဲနိုင်မှုမှတဆင့် ပေါ်ပေါက်လာ သော ထိခိုက်နစ်တာ ပျက်စီးမှုများနှင့် ပတ်သက်၍လည်း မည်သည့်ကိစ္စရပ်မျိုးမှာမဆို၊ လွတ်လပ် သောအာရှအသံ၊ ၄င်း၏ ညွှန်ကြားရေးမှုးများ၊ အရာရှိများနှင့် ၀န်ထမ်းများ၌ တာဝန်မရှိ။
ထိခိုက်နစ်နာပျက်စီးမှုဆိုရာ၌၊ တိုက်ရိုက်မဟုတ်သည့် အကျိုးဆက်အဖြစ်ပေါ်ထွက်လာသည့်၊ အရေး ထားလောက်သည့်၊ မထားလောက်သည့် အပြစ်ပေးအရေးယူဖို့ လိုအပ်သည်ဟု သတ်မှတ်နိုင်သည့် ထိခိုက်နစ်နာပျက်စီးမှုများအားလုံး အကျုံးဝင်သည်။
မိမိ၏ မူပိုင်ခွင့်အချိုးဖောက်ခံရလျှင် ဆောင်ရွက်ရမည့်နည်းလမ်း လွတ်လပ်သောအာရှအသံသည် တခြားသူများ၏ မူပိုင်ခွင့်များကို လေးစားအသိအမှတ်ပြုသည်။ လွတ် လပ်သောအာရှအသံ အင်တာနက်စာမျက်နှာကို အသုံးပြုသော ပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်အနေနှင့် မိမိ ပိုင်အကြောင်းအရာအချက်အလက်များအား မူပိုင်ခွင့်ချိုးဖောက်ပြီး ကူးယူခိုးချခံရသည်ဟု ယုံကြည် မှတ်ယူလျှင်၊ မူပိုင်ခွင့်ချိုးဖောက်ခံရသည့်ကိစ္စများဆိုင်ရာ လွတ်လပ်သောအာရှိအသံတာဝန်ခံထံ အောက်ဖော်ပြပါအချက်အလက်များကို စာရေးသားပေးပို့တိုင်တန်းရန်ဖြစ်ပါသည်။
၁။ မူပိုင်ရှင်၏ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် အခွင့်အာဏာပေးအပ်ခြင်းခံရသောပုဂ္ဂိုည်၏ လက်မှတ်အား စာတိုက်မှဖြဟ်စေ၊ အင်တာနက်အီးမေးလ်၊ ဖက်က်စ်တို့မှတဆင့်ဖြစ်စေ ပေးပို့ရန်
၂။ ပုံတူကူးယူအခိုးခံရသည့် အကြောင်းအရာနှင့်ပတ်သက်၍ မိမိသည်သာတရားဝင်မူပိုင်ရှင်ဖြစ် ကြောင်းအထောက်အထား
၃။ ဥပဒေချိုးဖောက်ပြီး ပုံတူအကူးခံရသည့် အကြောင်းအရာ၊ အချက်အလက်ကို ဖော်ပြပေးပို့ရန်။ ၄င်းအပြင် ထိုအကြောင်းအရာကို လွတ်လပ်သောအာရှအသံ အင်တာနက်စာမျက်နှာမှဖယ်ရှားပေးရန်၊ သို့တည်းမဟုတ် ထိုအကြောင်းအရာအားဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ခွင့်ကို ပိတ်ပင်ပေးရန်တောင်းဆိုသည့် စာ၊ ထို့အပြင် ၄င်းအကြောင်းအရာကို မည်သည့်နေရာမှာ ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သည်ဆိုသည့် လိုအပ်သောလုံ လောက်သည့်အချက်အလက်များ
၄။ ဆက်သွယ်နိုင်ရန်အတွက် တိုင်တန်းသူ၏ လိပ်စာ၊ တယ်လီဖုန်းနံပါတ်နှင့် အီးမေးလ်လိပ်စာများ
မူပိုင်ခွင့်အချိုးဖောက်ခံရသည့်ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ လွတ်လပ်သောအာရှအသံ၌ တာဝန်ယူဆောင်ရွက် နေသူ၏ အီးမေးလ်လိပ်စာမှာ contact@rfa.org ဖြစ်သည်။
၅။ ကူးယူခိုးချခံရသည့် အကြောင်းအရာ အချက်အလက်နှင့်ပတ်သက်၍ ထိုသို့ပြုမူခြင်းသည် မူပိုင်ရှင် သို့မဟုတ် မူပိုင်ရှင်က တရားဝင်လွှဲအပ်ထားသည့် ကိုယ်စားလှယ်၏ ခွင့်ပြုချက်မရပဲ ပြုမူခြင်းဖြစ်သည် ဆိုသည့်အကြောင်း၊ ယုံကြည်ထင်ရှားလောက်စေသည့် အထောက်အထားနှင့်ရှင်းလင်းချက်များ
၆။ တိုင်တန်းသူအနေဖြင့် မိမိ၏တိုင်တန်းချက်ထဲ၌ ဖော်ပြထားသော အချက်အလက်များ ခိုင်လုံတိကျ မှန်ကန်ပါသည်ဆိုသော အချက်နှင့်တကွ မိမိသည် မူပိုင်ခွင့်အချိုးဖောက်ခံရသော မူပိုင်ရှင်အစစ် အမှန်ဖြစ်သည်၊ သို့တည်းမဟုတ် မူပိုင်ရှင်က အခွင့်အာဏာပေးထားသော ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သည်ဆို သောအချက်များပါဝင်သည့် စာတစောင်
တိုင်တန်းသူအနေဖြင့် ၄င်းတင်ပြပေးပို့လာသော အချက်များ မမှန်ကန်ကြောင်း လိမ်လည်ထွက်ဆိုမှု များဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရှိရလျှင် တရားဥပဒေအရ အရေးယူ အပြစ်ပေးခံရနိုင်သည်(Under penalty of perjury) ဆိုသောအချက်ကို နားလည်သိရှိကြောင်းလည်း ဖော်ပြရပါမည်။
အမေရိကန်နိုင်ငံပြင်ပမှနေ၍ လွတ်လပ်သောအာရှအသံအင်တာနက်စာမျက်နှာ သုံးစွဲသူများနှင့် စပ်လျှဉ်း၍ လွတ်လပ်သောအာရှအသံအင်တာနက်စာမျက်နှာသည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအတွင်းမှ စီစဉ် ဆောင်ရွက်နေသော အင်တာနက်စာမျက်နှာဖြစ်သည်။ လွတ်လပ်သောအာရှအသံ၏ စာမျက်နှာကို သုံးစွဲသူသည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုပြင်ပကဖြစ်နေလျှင် အမေရိကန်ပို့ကုန်ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ များအပါအ၀င် သက်ဆိုင်ရာဥပဒေများနှင့်အညီ လိုက်လျောညီထွေ ဆောင်ရွက်ရန်မှာ သုံးစွဲသူ၏ တာဝန်သာဖြစ်သည်။
လွတ်လပ်သောအာရှအသံအင်တာနက်စာမျက်နှာကို သုံးစွဲသူများအနေဖြင့် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက် အလက်များအား မှတ်တမ်းပြုသိမ်းဆည်းခြင်း၊ အများသိအောင်ဖော်ထုတ်ခြင်းဆိုင်ရာ မူများနှင့်တကွ အထက်ဖော်ပြပါ လွတ်လပ်သောအာရှအသံ အင်တာနက်စာမျက်နှာအသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများအား အပြည့်အ၀နားလည်သဘောပေါက်သည်ဟု သတ်မှတ်သည်။
လွတ်လပ်သောအာရှအသံအင်တာနက်စာမျက်နှာကို သုံးစွဲမှုနှင့်စပ်လျှဉ်း၍ ကနဦးထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် အချက်အလက်၊ အရေးအသားနှင့်ပြောဆိုချက်များ သို့မဟုတ် နှုတ်အားဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ စာအားဖြင့်သော်လည်းကောင်း ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် သဘောပေါက် နားလည်မှုများအားလုံးအား ယခုဖော် ပြခဲ့သည့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် အစားထိုးလိုက်သည်။
ဤ အင်တာနက်စာမျက်နှာ သုံးစွဲခြင်းဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများသည် ကိုလံဘီယာခရိုင် (District of Columbia-D.C) ဥပဒေအောက်တွင်ရှိပြီး ထိုဥပဒေအရ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုဆောင်ရွက် သွားမည်။ မူပိုင်ခွင့်ချိုးဖောက်မှုပြသနာများအား ကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်ရာ၌၊ အမေရိကန်နိုင်ငံအတွင်း လက်တွေ့စီရင်ကျင့်သုံးနေသည့် ဥပဒေများရှိနေသော်ငြားလည်း ဒီစီဥပဒေနှင့်သာ ကိုင်တွယ်ဆောင် ရွက်သွားမည်။
ဥပဒေခွင့်ပြုချက်အရ လွတ်လပ်သောအာရှအသံအင်တာနက်စာမျက်နှာနှင့်စပ်လျှဉ်း၍ဖြစ်စေ၊ ၄င်း၏ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်စပ်လျှဉ်း၍ဖြစ်စေ ပေါ်ပေါက်လာသည့် အငြင်းပွားမှုများအား ဒီစီနယ်မြေ အတွင်းရှိ သက်ဆိုင်ရာတရားရုံးများ၌သာ စုံစမ်းစစ်ဆေးသွားမည်။ ဤအချက်ကို လွတ်လပ်သော အာရှအသံအင်တာနက်စာမျက်နှာသုံးစွဲသူက သဘောတူသည်ဟု သတ်မှတ်သည်။
အင်တာနက်စာမျက်နှာ သုံးစွဲခြင်းဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၏ တစိတ်တဒေသများအား လွတ်လပ်သောအာရှအသံကပယ်ဖျက်ခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်းသည် တခြားစည်းမျဉ်းအချက်အလက် တစိတ်တဒေသကိုပါ ပယ်ဖျက်ခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်းဆိုသည့် သဘောမသက်ရောက်စေရ။
ဤစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများထဲမှ စည်းမျဉ်းတစုံတခုသည် ဥပဒေအရ အာဏာသက်ရောက်မှုမရှိဟု တွေ့ရှိခဲ့သည်ရှိသော် မည်သည့်အကြောင်းပြချက်နှင့်မဆို ထိုစည်းမျဉ်းအား အမြင့်ဆုံးဥပဒေ အာဏာသက်ရောက်စေရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက်သွားမည်။ ကျန်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအားလုံးမှာမူ၊ မူလအတိုင်းဆက်လက်၍ ဥပဒေအရ အမြင့်ဆုံးအာဏာသက်ရောက်သည်။
*ယခုစာမျက်နှာအား မိတ်ဆွေများထံသို့ အီးမေးလ် ပေးပို့စေလိုပါသည်။ oards၊ Podcastingိံငြ့် RSS Feed မဵားအား သုံးစြဲမမြဵား အားလုံိးံငြ့်လည်း အကဵြံးဝင်သည်။ (အားလုံးကိုခံငြုံ၍ လတ်ြလပ်သောအာရအြသံ၊ အင်တာနက်စာမဵက်ြိာံ၊ သိုႛမဟုတ် ဌာနဟု သုံြးိံးသြားမည်။) လတ်ြလပ်သောအာရအြသံ၊ အင်တာနက်စာမဵက်ြိာံကို သုံးစြဲသည်ိံငြ့်တူပိင်ြနက်၊ ထိုသုံးစြဲသူသည် ဤစည်းမဵဉ်းမဵားကို လိုက်နာရန် သဘောတူသည်ဟု သတ်မတ်ြသည်။ လိုအပ်ပၝက လတ်ြလပ်သောအာရအြသံ အနေူဖင့် ဤစည်းမဵဉ်းမဵားကို အခဵိန်မေ႟ြူးပင်ဆင်ခငြ့်၊ူဖည့်စက်ြခငြ့် ရြိသည်။ ထိုသိုႛူပင်ဆင်ူဖည့်စက်ြသည်မဵားကိုလည်း လတ်ြလပ်သောအာရအြသံ၊ အင်တာနက်စာမဵက်ြိာံ၌ ဖော်ူပပေးသြားမည်။ ထိုသိုဖော်ူပ္ဘပီးသည်ိံငြ့်တူပိင်ြနက် ထိုပင်ဆင်၊ူဖည့်စက်ြခဵက်မဵားသည်၊ အတည်ူဖစ်္ဘပီး၊ အင်တာနက်စာမဵက်ြိာံ သုံးစြဲသူအနေိံငြ့်၊ ထိုအခဵက်မဵားအား လိုက်နာဖိုႛ သဘောတူသည်ဟု သတ်မတ်ြသည်။ မူပိုင်ခငြ့်
လတ်ြလပ်သောအာရအြသံ၊ အင်တာနက်စာမဵက်ြိာံပၝ အေုကာင်းအရာမဵားအား၊ အမေရိကန်အစိုးရမူပိုင်ခငြ့်ဥပဒေ၊ိုိံင်ငံတကာ မူပိုင်ခငြ့်ဥပဒေမဵာိးံငြ့်အညီ၊ အကာအကယြ် ပေးထားသည်။ လတ်ြလပ်သောအာရအြသံ၊ အင်တာနက်စာမဵက်ြိာံ၌၊ စာအာူးဖင့်ရေးသားဖော်ူပထားသည့် အေုကာင်းအရာမဵားအား၊ူဖန်ႛဝေူခင်း၊ူပန်လည် ထုတ်ဝေူခင်း၊ူပန်လည်အသုံူးပြူခင်းမဵြိးကို၊ ဋ္ဌကိဆြိုခငြ့်ူပသြည်။ သိုႛသော် ထိုသိုႛ အသုံူးပလ္တြွင်၊ လတ်ြလပ်သောအာရအြသံပိုင် အေုကာင်းအရာမဵာူးဖစ်ေုကာင်း အောက်ပၝအတိုင်း ရည်ညနြ်းဖော်ူပရမည်။ Copyright 2006, RFA. Reprinted with the permission of Radio Free Asia, 2025 M St. NW, Suite 300, Washington DC 20036. http:/ / www.rfa.org
လတ်ြလပ်သောအာရအြသံ၊ အင်တာနက်စာမဵက်ြိာံမြ သတင်း၊ ဆောင်းပၝး စသည်တိုႛကို၊ တခုလုံး မဟုတ်ပဲ၊ တစိတ်တပိုင်းကို ကောက်ိံတ်ြအသုံူးပြူခင်းမဵြိူးဖစ်လ္တွင်၊ �ကောက်ိံတ်ြခဵက်� မ္တွသာူဖစ်ေုကာင်း ဖော်ူပအသိပေးရမည်။ ထိုႛအူပင် ထိုကောက်ိံတ်ြခဵက်သည်၊ တပုဒ်လုံး၏ မူရင်းအာဘော်အားေူပာင်းလဲသြားစေူခင်းမဵြိး၊ အဓိပဍ္ဎာယ်ကောက် လြဲမြားသြားအောင် ဖန်တီူးခင်းမဵြိးမဵား မူပလြုပ်ရ။
အထူးသတိူပရြန်အခဵက်မြာ၊ လတ်ြလပ်သောအာရအြသံ၊ အင်တာနက်စာမဵက်ြိာံ၌ ဖော်ူပထားသည့်၊ ဌာန ၉ ခုစလုံး၏၊ မည်သည့် အသံလငြ့်အစီအစဉ်၊ မည်သည့် ဓာတ်ပုံ၊ ဂရပ်ဒီဇိုင်း၊ ဗီဒြီယိုမဵားကိုမ္တွ၊ ထုတ်လငြ့် ဖော်ူပူခင်း၊ူပန်လည် ထုတ်လငြ့်ဖော်ူပူခင်းမဵြိးကိုမဆိုမူ၊ူပင်းထန်စြာ တာူးမစ်ပိတ်ပင်သည်။ လတ်ြလပ်သောအာရအြသံ၏ အမတ်ြတံဆိပ်
Radio Free Asia၊ RFAိံငြ့် RFA အစီစဉ်အမည်မဵားသည်၊ RFA ဌာန၏ အမတ်ြတံဆိပ်မဵာူးဖစ်္ဘပီး၊ အားလုံးသည် လတ်ြလပ်သောအာရအြသံ၏ မူပိုင်ူဖစ်သည်။ လတ်ြလပ်သောအာရအြသံထံမြ၊ စာအာူးဖင့် ဋ္ဌကိတြင် ခငြ့်ူပခြဵက် မရရြိပဲိံငြ့်၊ လတ်ြလပ်သောအာရအြသံ၏၊ မည်သည့် သကေဿတ၊ အမတ်ြတံဆိပ်ိံငြ့် ဂရပ်ဒီဇိုင်းမဵားကိုမ္တွ၊ သုံးစြဲူခင်း မူပလြုပ်ရ။ သိုႛရာတငြ်၊ လတ်ြလပ်သောအာရအြသံက စီစဉ်ပေးထားသော၊ RSS Feeds မြာ ပၝဝင်သည့်၊ လတ်ြလပ်သောအာရအြသံ အမတ်ြတံဆိပ်ကိုမူ၊ အသုံူးပြိုိံင်သည်။ သိုႛသော် ထိုသိုႛ အသုံူးပရြာ၌၊ ရြေႚတငြ် ဆက်လက် ဖော်ူပသြားမည့်၊ လတ်ြလပ်သောအာရအြသံ RSS Feeds ဆိုင်ရာ မူမဵာိးံငြ့်အညီူဖစ်ရမည်။ လတ်ြလပ်သောအာရအြသံ၊ အင်တာနက်စာမဵက်ြိာံကို၊ မိမိပိုင် အင်တာနက်စာမဵက်ြိာံအတငြ်း၊ ထည့်သငြ်း ဖော်ူပမြ
လတ်ြလပ်သောအာရအြသံ၊ အင်တာနက်စာမဵက်ြိာံအား၊ ၄င်း၏ ကိုယ်ပိုင်အင်တာနက်လ်ိပ်စာ မပေၞစေရပဲ၊ မိမိပိုင် အင်တာနက်စာမဵက်ြိာံ လိပ်စာဘောင်အတငြ်း၊ သတ်ြသငြ်း အသုံူးပြူခင်းမဵြိး၊ ဖော်ူပူခင်းမဵြိးကို ခငြ့်မူပြ။
လတ်ြလပ်သော အာရအြသံ၊ အင်တာနက်စာမဵက်ြိာံကို ဆက်သယြ်ူခင်ိးံငြ့် စပ်လဵဉ်း၍
လတ်ြလပ်သောအာရအြသံသည် အူမင့်မားဆုံး သတင်းအဆင့်အတန်ိးံငြ့် သတင်းကဵင့်ဝတ်မဵားကို လိုက်နာကဵင့်သုံးသော၊ လတ်ြလပ်သော၊ စီးပြားရေးလုပ်ငန်းမဟုတ်သော အဖြဲႚအစည်ူးဖစ်သည်။ လတ်ြလပ်သောအာရအြသံ၊ အင်တာနက်စာမဵက်ြိာံအား ဝင်ရောက် ဆက်သယ်ြခငြ့် ပေူးခင်းသည် ၁။ လူပုဂ္ဂိလ်ြတဦးယောက်၊ အဖြဲႚအစည်း တစုံတခု၏ ဦးတည်ခဵက်၊ အတြေးအခေၞ၊ ၄င်း၏ အင်တာနက်စာမဵက်ြိာံ၊ိုိံင်ငံရေးလပ်ြရြားမြ၊ တင်ူပခဵက်မဵာိးံငြ့် လုပ်ငန်းဆောင်တာမဵားအား၊ လတ်ြလပ်သောအာရအြသံက ထောက်ခံမြ ပေးသည်၊ေုကာ်ူငာပေးသည် ဟူသည့် သဘော မသက်ရောက်စေရ၊ ၂။ လတ်ြလပ်သောအာရအြသံ၊ အင်တာနက်စာမဵက်ြိာံပၝ အေုကာင်းအရာမဵားကို စီးပြားရေးရည်႟ယ်ြခဵက်အတကြ် အသုံး မူပရြ၊ လတ်ြလပ်သောအာရအြသံ၏ မည်သည့် အင်တာနက်စာမဵက်ြိာံကိုမဆို ဝင်ရောက်ုကည့်႟ခြငြ့်အား၊ လတ်ြလပ်သောအာရအြသံအနေူဖင့်၊ူပန်လည် ႟ုတ်သိမ်ိးုိံင်ခငြ့် ရြိသည်။ လတ်ြလပ်သောအာရအြသံ၊ အင်တာနက်စာမဵက်ြိာံ၌ ဖော်ူပထားသော တူခားအင်တာနက်စာမဵက်ြိာံမဵာိးံငြ့် စပ်လဵဉ်း၍
လတ်ြလပ်သောအာရအြသံ၊ အင်တာနက်စာမဵက်ြိာံ၌၊ တူခားအင်တာနက်စာမဵက်ြိာံ အဆက်အသယ်ြမဵားကို ဖော်ူပပေးထားသည်။ ထိုစာမဵက်ြိာံမဵားသည်၊ လတ်ြလပ်သောအာရအြသိံငြ့် လုံးဝ ပတ်သက်မြ မရြိပၝ။ ၄င်းအူပင် ထိုအင်တာနက်စာမဵက်ြိာံမဵားပၝ အေုကာင်းအရာ၊ စီစဉ်ထုတ်လုပ်သူ၊ အစီစဉ်မဵာိးံငြ့်၊ လုပ်ငန်းဆောင်႟က်ြမမြဵားအား၊ လတ်ြလပ်သောအာရအြသံက သဘောတူ ထောက်ခံမြ မရြိပၝ။ ထိုစာမဵက်ြိာံမဵား၏ အေုကာင်းအရာ၊ စီစဉ်ထုတ်လုပ်သူ၊ ၄င်းအပေၞ အားထာိးုိံင်မြ၊ တိကဵမြ၊ အရည်အသြေး၊ေုကာ်ူငာ၊ ထုတ်လုပ်မြ၊ လုပ်ငန်းဆောင်တာမဵားအပၝအဝင်၊ ဖော်ူပထားသည့် တူခားကိင်္စရပ်မဵာိးံငြ့် စပ်လဵဉ်း၍၊ လတ်ြလပ်သောအာရအြသံ၌၊ စိုးစဉ်းမ္တွ တာဝန် မရြိပၝ။ ထိုအင်တာနက်စာမဵက်ြိာံမဵားတငြ် ဖော်ူပထားသည့်၊ သိုႛမဟုတ် ထိုစာမဵက်ြိာံမဵားမတြဆင့် ဖော်ူပထားသည့်၊ အေုကာင်းအရာမဵား၊ ထုတ်လုပ်တင်ူပခဵက်မဵာိးံငြ့် ဝန်ဆောင်မလြုပ်ငန်းမဵားအား အသုံူးပရြာမတြဆင့်၊ ပေၞထက်ြလာသည့်၊ သိုႛမဟုတ် ပေၞထက်ြလာသည်ဟု စတ်ြစြဲခံရသည့်၊ မည်သည့် အပဵက်အစီး၊ ဆုံး႟ြံးမမြဵာိးံငြ့် ပတ်သက်၍မ္တွလည်း၊ တိုက်႟ိုက်သော်လည်းကောင်း၊ သယ်ြဝိုက်၍သော်လည်းကောင်း၊ လတ်ြလပ်သောအာရအြသံ၌ တာဝန် မရြိပၝ။ RSS Feeds နည်ူးဖင့် သတင်းမဵား တိုက်႟ိုက်ရယူသည့် ကိင်္စ www.rfa.org/ rss/ index.html လိပ်စာမြ တဆင့် RSS Feed မဵား ရယိူုိံင်အောင် လတ်ြလပ်သောအာရအြသံက အထူးတလည် စီစဉ်ပေးထားပၝသည်။ လတ်ြလပ်သောအာရအြသံ RSS Feed မဵားတငြ် သတင်းခေၝင်းစဉ်မဵား၊ အကဵဉ်းခဵပ်ြမဵာိးံငြ့် သတင်းတပုဒ်လုံးကို ဖတ်႟ြိုိံင်ပၝသည်။ ထို RSS Feed အားလုံးကို လတ်ြလပ်သောအာရအြသံက ပိုင်ဆိုင်သည်။ လတ်ြလပ်သောအာရအြသံ၊ RSS Feeds မြာ ဖော်ူပထားသည့် အေုကာင်းအရာ အခဵက်အလက် တစိတ်တပိုင်းကိုဖစ်စေ၊ သိုႛမဟုတ် လတ်ြလပ်သောအာရအြသံ၊ RSS Feeds ကို ဝင်ရောက်ဖတ်႟ြိုံင်သည့် လိပ်စာကိုဖစ်စေ၊ တဆင့် ထပ်မံ ဖော်ူပိုံင်သည်။
သိုႛရာတငြ် အောက်ဖော်ူပပၝ အခဵက်မဵာိးံငြ့် ညီညတ်ြမသြာလ္တွင် ဖော်ူပိုံင်ခငြ့် ရြိသည်။ ဖော်ူပထားသော လတ်ြလပ်သောအာရအြသံ၊ RSS Feeds လိပ်စာမဵားသည်၊ လတ်ြလပ်သောအာရအြသံ၊ အင်တာနက်စာမဵက်ြိာံသိုႛ၊ တိုက်႟ိုက် ရောက်ရြိုံင်ရမည်။ လတ်ြလပ်သောအာရအြသံ၊ RSS Feeds မြ၊ ရယူသည့် အခဵက်အလက်မဵားအား တဆင့်ူပန်လည် အသုံူးပြူခင်း၊ ဖော်ူပူခင်းအာူးဖင့်၊ လူပုဂ္ဂိလ်ြတဦးတယောက်၊ အဖြဲႚအစည်းတစုံတခု၏ ဦးတည်ခဵက်၊ အတြေးအခေၞ၊ အင်တာနက်စာမဵက်ြိာံ၊ အစီစဉ်မဵာိးံငြ့် လုပ်ငန်းဆောင်႟က်ြမကြို လတ်ြလပ်သောအာရအြသံက ထောက်ခံသည်၊ူမၟင့်တင်ပေးသည် ဆိုသည့် သဘော မသက်ရောက်စေရ။
လတ်ြလပ်သောအာရအြသံ၊ RSS Feeds ၌ ဖော်ူပထားသည့် ခေၝင်းစဉ်ိံငြ့် အကဵဉ်းခဵပ်ြမဵား အပၝအဝင်၊ အေုကာင်းအရာတခုလုံး၏ မူရင်း အဓိပဍ္ဎာယ် အိံစ်ြသာရမဵားအားေူပာင်းလဲပစ်ူခင်း၊ အဓိပဍ္ဎာယ်ကောက်မြားအောင် ဖန်တီူးခင်းမဵား မူပလြုပ်ရ။
လတ်ြလပ်သောအာရအြသံ၊ RSS Feeds မတြဆင့်၊ ရယူထားသော သတင်ိးံငြ့် တူခားအေုကာင်းအရာမဵားကိုပင်ဆင်၊ူဖည့်စကြ်၊ေူပာင်းလဲူခင်းမဵား မူပလြုပ်ရ။
လတ်ြလပ်သောအာရအြသံ၊ အင်တာနက်စာမဵက်ြိာံကို သုံးစြဲူခင်း
လူပုဂ္ဂိလ်ြတဦးတယောက်အနေိံငြ့်၊ လတ်ြလပ်သောအာရအြသံ၊ RSS Feeds ပၝ၊ အေုကာင်းအရာ အခဵက်အလက်ကို၊ ၄င်း၏ ကိုယ်ပိုင် အင်တာနက်စာမဵက်ြိာံ၌ ဖော်ူပမည် ဆိုလ္တွင်၊ “လတ်ြလပ်သောအာရအြသံ” နာမည်ကို ထည့်သငြ်း ဖော်ူပရမည်။ ထိုႛအူပင် “လတ်ြလပ်သောအာရအြသံ၏ သတင်းခေၝင်းစဉ်မဵား” ဟုလည်း ဖော်ူပရမည့်အူပင်၊ RSS Feeds တငြ် ဖော်ူပထားသော လပ်သောအာရအြသံ၏ သကေဿတတံဆိပ်ကိုလဲ ဖော်ူပရမည်။ သိုႛသော် တစုံတရာကိုမ္တွ၊ူပြူပင်ေူပာင်းလဲမြ မလုပ်ရ။ အထက် ဖော်ူပခဲ့သည့် ကိင်္စရပ်မဵြိးမြ လြဲ၍၊ လတ်ြလပ်သောအာရအြသံ၏ မူပိုင်ခငြ့်သကေဿတ၊ သိုႛမဟုတ် လတ်ြလပ်သောအာရအြသံ၏ အမတ်ြအသားမဵား၊ လတ်ြလပ်သောအာရအြသံ၊ RSS Feed မဵားအား၊ တူခားကိင်္စရပ်မဵား၌ အသံူးပြူခင်းမဵြိးကိုမူပင်းထန်စြာ တာူးမစ်သည်။ လတ်ြလပ်သောအာရအြသံ၊ RSS Feeds မတြဆင့် ရယူထားသော သတင်ိးံငြ့် တူခားအေုကာင်းအရာမဵားကို အသုံူးပမြည် ဆိုလ္တွင်၊ ဤစည်းမဵဉ်းစည်းကမ်းမဵားပၝ၊ မူပိုင်ခငြ့် အခန်းကို ဖတ်႟စြေလိုပၝသည်။ လတ်ြလပ်သောအာရအြသံ အနေူဖင့်၊ RSS Feeds စီစဉ်ပေးထာူးခင်းကို အခဵိန်မေ႟ြး ရပ်ဆိုင်ိးုိံင်ခငြ့် ရြိသည်။ ထိုႛအူပင် လူပုဂ္ဂိလ်ြတဦးတယောက်က လတ်ြလပ်သောအာရအြသံ၊ RSS Feeds ကို ဆက်သယ်ြခငြ့်၊ အသုံူးပခြငြ့်၊ လတ်ြလပ်သောအာရအြသံ၊ RSS Feeds ပၝ အေုကာင်းအရာမဵားအား အသုံူးပခြငြ့်၊ သိုႛမဟုတ် လတ်ြလပ်သောအာရအြသံ၏ မူပိုင်ခငြ့်တံဆိပ် အသုံူးပခြငြ့်မဵားကိုလည်း၊ လတ်ြလပ်သောအာရအြသံ အနေူဖင့် အခိဵန်မေ႟ြး ရပ်ဆိုင်ိးုိံင်ခငြ့် ရြိသည်။ ထိုႛအူပင် အောက်ပၝ စည်းကမ်းခဵက်မဵားအား လိုက်နာရမည်။
၁။ သူတပၝး ဂုဏ်သိက္ခာညၟြိးံမြ်းစေသော၊ မမန်ြကန်သော၊ ထင်ယောင်ထင်မြာူးဖစ်စေိုံင်သော၊ ညစ်ညမ်းသော၊ မဖယ်ြမရာူဖစ်သော၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရြိာိံးဆသြော၊ အုကမ်းဖက်သော၊ အလြဲသုံးစားလုပ်သော၊္ဘခိမ်းေူခာက်သော၊ မတရာူးပကြဵင့်သော၊ ခြဲူခာြးိံမ်ခဵဆက်ဆံသော၊ လူမဵြိးခြဲူခားစိတ်ရြိသော၊ ႟ုံႛရင်ုးကမ်းတမ်းသော၊ သူတပၝးအတငြ်းရေးကို ကဵြးကေဵာ်ထိပၝးသော၊ ဥပဒေ ခဵြိးဖောက်သော၊ အမုန်းစိတ်ပြားစေမည့် အရေးအသားမဵား ပၝဝင်သော၊ အ႟ယ်ြမရောက်သေးသူမဵားအား တနည်းနည်ူးဖင့် ထိခိုက်စေိုံင်သော အရေးအသား၊ အေုကာင်းအရာ၊ ဓာတ်ပုံ၊ ဗီဒြီယို အစရြိသည်မဵားကို လတ်ြလပ်သောအာရအြသံ၊ Message Boards သိုႛ မပေးပိုႛရ၊ ၂။ လတ်ြလပ်သောအာရအြသံ၊ Message Boards ကို ဆက်သယ်ြရာ၌၊ လတ်ြလပ်သောအာရအြသံ၏ အရာရြိမဵား၊ ဝန်ထမ်းမဵား အပၝအဝင်၊ တူခား လူပုဂ္ဂိလ်ြတဦးတယောက်၊ အဖြဲႚအစည်းတစုံတခုအူဖစ် အယောင်ဆောင် ဆက်သယ်ြမမြဵြိး မလုပ်ရ။ (ဥပမာ � မိမိကိုယ်ပိုင်အမည်ိံငြ့် အီးမေးလ်လိပ်စာကို မသုံးပဲ၊ တူခားသူ တဦးဦး၊ တူခားအဖြဲႚအစည်း တခုခု၏ အမည်နာမိံငြ့် အီးမေးလ်လိပ်စာကို သုံးစြဲမမြဵြိး။)
၃။ အီလက်ထရောနစ်နည်းလမ်းအာူးဖင့်ူဖန်ႛခဵိုံင်ခငြ့် ရြိသည် ဆိုသော မူပိုင်ခငြ့်၊ သိုႛမဟုတ် တူခား အလားတူ ခငြ့်ူပခြဵက်တစုံတရာ ရြိမသြာလ္တွင်၊ အေုကာင်းအရာ အခဵက်အလက်မဵားကို၊ လတ်ြလပ်သောအာရအြသံ၊ Message Boards သိုႛ ပေးပိုႛိုံင်သည်။ မူပိုင်ခငြ့်၊ အမတ်ြတံဆိပ်၊ အဖြဲႚအစည်း သိုႛမဟုတ် ကုမဍ္ဎဏီတခုခု၏ လ္တြွိႚဝက်ြကိင်္စ၊ တသီးပုဂ္ဂလလတ်ြလပ်ခငြ့်၊ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ၊ အမဵားစိတ်ဝင်စားမြ၊ ကဵင့်ဝတ်ဆိုင်ရာ သိုႛမဟုတ် မူပိုင်ခငြ့်ဆိုင်ရာ သိုႛမဟုတ် ယုံကည်အပ်ိံငြ်းမဆြိုင်ရာမဵာိးံငြ့် စပ်လဵဉ်း၍ လိုက်နာရမည့် စည်းမဵဉ်းဥပဒေမဵား (ဥပမာ � လ္တြွိႚဝက်ြခဵက်အူဖစ် ထိန်းသိမ်းထားရမည့် အခဵက်အလက်မဵား၊ သိုႛမဟုတ် ကုမဍ္ဎဏီလ္တြွိႚဝက်ြကိင်္စမဵား) အပၝအဝင်၊ လတ်ြလပ်သောအာရအြသံ၊ အင်တာနက်စာမဵက်ြိာံတငြ် ဖော်ူပထားသော တူခားအင်တာနက်စာမဵက်ြိာံမဵား၏ အခငြ့်အရေိးံငြ့် စည်းမဵဉ်းမဵားအား ခဵြိးဖောက်ူခင်း၊ ထိုစာမဵက်ြိာံမဵားပၝ အေုကာင်းအရာမဵားကို ခိုးယူ၊ ကူးခဵ္ဘပီး၊ မိမိကိုယ်ပိုင်အူဖစ် ဖော်ူပူခင်းမဵြိး မူပလြုပ်ရ။ လတ်ြလပ်သောအာရအြသံ၊ Message Boards သိုႛ ပေးပိုႛသော အေုကာင်းအရာမဵားသည်၊ မိမိ ကိုယ်ပိုင်သော်လည်းကောင်း၊ သိုႛမဟုတ် အမဵားပိုင် (အမဵာူးပည်သူ အသုံူးပခြငြ့် ရြိသော အေုကာင်းအရာ အခဵက်အလက်မဵြိး) သော်လည်းကောင်ူးဖစ်ရမည်။ ဤအခဵက်ကို လတ်ြလပ်သောအာရအြသံ၊ အင်တာနက်စာမဵက်ြိာံ အသုံူးပသြူအနေူဖင့် သဘောတူသည်၊ လိုက်နာရန် ကတိူပသြည်ဟု သတ်မတ်ြသည်။ မည်သည့် ဂီတကိုမ္တွ၊ လတ်ြလပ်သောအာရအြသံ၊ Message Boards ၊ သိုႛမဟုတ် လတ်ြလပ်သောအာရအြသံ၏ တူခားဌာနမဵားသိုႛ မပေးပိုႛရ။
၄။ လတ်ြလပ်သောအာရအြသံ၊ အင်တာနက်စာမဵက်ြိာံပၝ အေုကာင်းအရာမဵားအား၊ စီးပြားရေးလုပ်ငန်ိးံငြ့် မသက်ဆိုင်သည့် ကိင်္စမဵား၌သာလ္တွင် သုံးစြဲခငြ့် ရြိသည်။ အလခြူံခင်း၊ ရန်ပုံငေတြောင်းခူံခင်း၊ ကုန်ပင်္စည်ိးံငြ့် ဝန်ဆောင်မလြုပ်ငန်းမဵားအား ထောက်ခံခဵက်ပေူးခင်း၊ ယုံကည်လက်ခံလာအောင် ဋ္ဌကြိးပမ်ူးခင်း၊ေုကာ်ူငာပေူးခင်း စသည့် လုပ်ရပ်မဵြိးပၝဝင်နေသော အေုကာင်းအရာမဵားကို မူဖန်ႛခဵိရ၊ မပေးပိုႛရ။
၅။ Virus၊ သိုႛမဟုတ် အလားတူ ထိခိုက်ပဵက်စီးစေိုံင်သော Codeိံငြ့်၊ တူခားအရာမဵားကို မပေးပိုႛရ၊ လက်ဆင့်မကမ်းရ။ ရာဇဝတ်မြေူမာက်သော အူပအြမူမဵား ကဵြးလန်ြအောင် သြေးဆောင်ရန်၊ တူခားတစုံတဦးအူဖစ် အယောင်ဆောင်ရန်၊ Chain Letter မဵား ပေးပိုႛရန်၊ အစုလိုက် အူပံလြိုက် စာမဵာူးဖန်ႛဝေရန်၊ သိုႛမဟုတ် Spam မဵား ပေးပိုႛရန် စသည့် ရည်႟ယ်ြခဵက်မဵာူးဖင့်၊ လတ်ြလပ်သောအာရအြသံ၊ အင်တာနက်စာမဵက်ြိာံအား အသုံးမခဵရ။ ထိုႛအူပင် Spam မဵား ပေးပိုႛရန် ရည်႟ယ်ြခဵက်ူဖင့်၊ လတ်ြလပ်သောအာရအြသံ၊ အင်တာနက်စာမဵက်ြိာံသုံးစြဲသူ တူခားပုဂ္ဂိလ်ြမဵား၏ အီးမေးလ်လိပ်စာမဵားအား၊ ရယူ သုံးစြဲူခင်းမဵြိး မူပလြုပ်ရ။ ၆။ လတ်ြလပ်သောအာရအြသံသိုႛ အေုကာင်းအရာ၊ အခဵက်အလက်၊ အသံ၊ ဗီဒြီယိုမဵား ပေးပိုႛလာလ္တွင်၊ ထိုအရာမဵားအား သုံးစြဲခငြ့်လိုင်စင်ကိုပၝ၊ လတ်ြလပ်သောအာရအြသံသိုႛ တပၝတည်း အပ်ိံငြ်းလိုက်သည်ဟု မတ်ြယူသည်။ ထိုသုံးစြဲခငြ့် လိုင်စင်အမဵြိးအစားသည် အထူးသီးသန်ႛမဟုတ်သော၊ ဆက်တိုက်ူဖစ်သော၊ အခေုကးငြေ ပေးစရာမလိုသော၊ တကမ္တာလုံးဆိုင်ရာ သုံးစြဲခငြ့် လိုင်စင်မဵြိူးဖစ်သည်။ ထို သုံးစြဲခငြ့်လိုင်စင်အရ ဆိုလ္တွင်၊ အဆိုပၝ ပေးပိုႛလာသော အရာမဵားကို သုံးစြဲခငြ့်၊ မိတ္ဇကြူးခငြ့်၊ေူပာင်းလဲူပင်ဆင်ခငြ့်၊ တူခားသိုႛ ပေးပိုႛခငြ့်၊ မီဒီယာအားလုံးမြာ အမဵားသိအောင် ဖော်ူပ ဆောင်႟က်ြခငြ့်မဵားကို လတ်ြလပ်သောအာရအြသံအား ပေးအပ်သည်ဟု သတ်မတ်ြသည်။
၇။ အသက် ၁၈ အောက် ပုဂ္ဂိလ်ြမဵားအနေူဖင့်၊ လတ်ြလပ်သောအာရအြသံ၊ Message Boards ကို အသုံူးပလြိုလ္တွင်၊ မိဘ အုပ်ထိန်းသူ၏ ခငြ့်ူပခြဵက် ရရြိထားသူဖစ်ရမည်။ အသက် ၁၃ိံစ်ြအောက်၊ အ႟ယ်ြမရောက်သေးသူမဵားအနေူဖင့်၊ လတ်ြလပ်သောအာရအြသံ၊ Message Boards ကိုသော်လည်းကောင်း၊ လတ်ြလပ်သောအာရအြသံကိုသော်လည်းကောင်း၊ မည်သည့် အေုကာင်းအရာ အခဵက်အလက်မ္တွ ပေးပိုႛခငြ့် မရြိ။ Message Boards ၌လည်း ပၝဝင် ဆြေးြေိံးခငြ့် မရြိ။ ၈။ မိမိ၏ကိုယ်ပိုင် အီးမေးလ်လိပ်စာ သုံး၍၊ လတ်ြလပ်သောအာရအြသံ၊ Message Boards သိုႛ၊ အေုကာင်းအရာမဵား ပေးပိုႛသူသည်၊ ထိုအေုကာင်းအရာမဵား အားလုံိးံငြ့်ပတ်သက်၍၊ တဦးတည်းသော တာဝန် ရြိသူဖစ်သည်။ လတ်ြလပ်သောအာရအြသံ အနေူဖင့်၊ ပေးပိုႛလာသော အေုကာင်းအရာဟူသမ္တွကို၊ စစ်ဆေးစိစစ်ူခင်ူးပြိုံင်မြာ မဟုတ်သလို၊ူပမြာလည်း မဟုတ်ပၝ။
လတ်ြလပ်သောအာရအြသံ၊ သိုႛမဟုတ် ၄င်း၏ Message Boards သိုႛ ပေးပိုႛလာသော အေုကာင်းအရာမဵာိးံငြ့်ပတ်သက်၍၊ လတ်ြလပ်သောအာရအြသံ၌ လုံးဝ တာဝန် မရြိ ဆိုသော အခဵက်ကို အသုံူးပသြူက သဘောတူသည်ဟု သတ်မတ်ြသည်။ လတ်ြလပ်သောအာရအြသံ၊ Message Boards က ခဵမတ်ြထားသော စည်းမဵဉ်းစည်းကမ်းမဵားအား ခဵြိးဖောက်သည်ဟု ယူဆသတ်မတ်ြလ္တွင်၊ သိုႛတည်းမဟုတ် လတ်ြလပ်သောအာရအြသံက ခဵမတ်ြထားသော မူဝၝဒမဵာိးံငြ့် ဖီလာဆန်ႛကဵင်ူဖစ်နေသည်၊ သိုႛတည်းမဟုတ်ူငင်းပယ်သင့်သည်ဟု ယူဆသတ်မတ်ြလ္တွင် (ထိုသိုႛ ယူဆသတ်မတ်ြရန်၊ မသတ်မတ်ြရန်မြာ လတ်ြလပ်သောအာရအြသံ၏ ကိုယ်ပိုင် အခငြ့်အာဏာူဖစ်သည်။)၊ လတ်ြလပ်သောအာရအြသံအနေူဖင့်၊ ထိုပေးပိုႛလာသော အေုကာင်းအရာမဵားအား ဖဵက်သိမ်းခငြ့်၊ တည်ူးဖတ်ခငြ့်ိံငြ့်ေ႟ြႛေူပာင်းခငြ့် ရြိသည် (တာဝန် မဟုတ်ပၝ၊ ‘လုပ်ပိုင်ခငြ့်’ူဖစ်ပၝသည်)။ ဤအခဵက်ကို၊ ပေးပိုႛသူအနေိံငြ့် သဘောတူသည်ဟု သတ်မတ်ြသည်။ ၉။ ထို ပေးပိုႛလာသော အေုကာင်းအရာမဵား၊ တိကဵမန်ြကန်မြ ရြိ၊ မရြိကို လတ်ြလပ်သောအာရအြသံအနေူဖင့်၊ စုံစမ်းစစ်ဆေး အတည်ူပြ မပေိးုိံင်ပၝ။ ၄င်းအူပင် ထိုပေးပိုႛလာသော အေုကာင်းအရာမဵားအား၊ မူပိုင်ခငြ့် ရြိသူက ပေးပိုႛသည်၊ သိုႛတည်းမဟုတ် မူပိုင်ခငြ့် ရြိသူ၏ ခငြ့်ူပခြဵက်ူဖင့် ပေးပိုႛသည်၊ သိုႛတည်းမဟုတ် လတ်ြလပ်သောအာရအြသံက ခဵမတ်ြထားသော စည်းမဵဉ်းစည်းကမ်းမဵာိးံငြ့် ကိုက်ညီသည်ဟုလည်း၊ လတ်ြလပ်သောအာရအြသံအနေူဖင့် တာဝန် မခံပၝ။ ၁၀။ ခဵမတ်ြထားသော စည်းမဵဉ်းစည်းကမ်းမဵားအား ခဵြိးဖောက်မြ အပၝအဝင်၊ မည်သည့်အေုကာင်ိးံငြ့် မဆို၊ လတ်ြလပ်သောအာရအြသံ၊ Message Boards သုံးစြဲခငြ့်အား၊ ကန်ႛသတ်ိုံင်သည့်၊ သိုႛမဟုတ် အ္ဘပီးတိုင် ႟ုတ်သိမ်ိးုိံင်သည့် အခငြ့်အရေး၊ လတ်ြလပ်သောအာရအြသံ၌ ရြိသည်ဟူသော အခဵက်ကို အသုံူးပသြူအနေူဖင့် သိနားလည်ထားသည်ဟု သတ်မတ်ြသည်။ လတ်ြလပ်သောအာရအြသံ၊ အင်တာနက်စာမဵက်ြိာံ သုံးစြဲသူအနေူဖင့် လိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းမဵား
လတ်ြလပ်သောအာရအြသံ၊ Message Boards အပၝအဝင်၊ ၄င်း၏ အင်တာနက်စာမဵက်ြိာံကို အသုံူးပသြူသည်၊ သိုႛမဟုတ် www.rfa.org လိပ်စာမတြဆင့် ဆောင်းပၝး၊ အီးမေးလ်၊ သိုႛမဟုတ် တူခားအခဵက်အလက်မဵား ပေးပိုႛသူသည်၊ အောက်ဖော်ူပပၝ စည်းကမ်းမဵားအား လိုက်နာရန် သဘောတူသည်၊ ကတိကဝတ်ူပြ အာမခံသည်ဟု မတ်ြယူသည်။ ၁။ လတ်ြလပ်သောအာရအြသံ၊ အင်တာနက်စာမဵက်ြိာံ Message Boards သိုႛ ပေးပိုႛသော အေုကာင်းအရာ အခဵက်အလက်မဵားသည်၊ သိုႛတည်းမဟုတ် လတ်ြလပ်သောအာရအြသံ၊ အင်တာနက်စာမဵက်ြိာံသိုႛူဖစ်စေ၊ ၄င်းမတြဆင့်ူဖစ်စေ၊ ပေးပိုႛလာသော အေုကာင်းအရာ အခဵက်အလက်မဵားသည်၊ လတ်ြလပ်သောအာရအြသံက ခဵမတ်ြထားသော စည်းမဵဉ်းစည်းကမ်းမဵားကို မခဵြိးဖောက်ပၝ၊ ခဵြိးဖောက်မည် မဟုတ်ပၝ။ ၂။ လတ်ြလပ်သောအာရအြသံ၊ အင်တာနက်စာမဵက်ြိာံ သုံးစြဲမဆြိုင်ရာ စည်းမဵဉ်းစည်းကမ်းမဵာိးံငြ့်အညီ လိုက်နာဆောင်႟က်ြပၝမည်။ ၄င်းအူပင် အောက်ဖော်ူပပၝ အခဵက် ၄ ခဵက်ေုကာင့် ပေၞပေၝက်လာရသော ဥပဒေညိစနြ်းမမြဵားအတကြ်၊ ပေးဆပ်ရမည့် ငြေေုကး၊ တန်ဖိုး၊ ကုန်ကဵစားရိတ် (ရြေႚနေခ အပၝအဝင်) မဵားကို၊ မိမိဖာသာမိမိ ပေးဆောင်သြားရန် သဘောတူသည်။ ထိုငြေေုကးကိင်္စမဵား၊ တိုင်တန်းမမြဵား၊ တာဝန်ရြိမမြဵာိးံငြ့် ပတ်သက်၍လည်း၊ လတ်ြလပ်သောအာရအြသိံငြ့်တကြ၊ ၄င်း၏ ညနြ်ုကားရေးမြးမဵား၊ အရာရြိမဵား၊ ဝန်ထမ်းမဵား၊ အဖြဲႚဝင်မဵာိးံငြ့် မူပိုင်ခငြ့် ပိုင်ရင်ြမဵားအား၊ ထိခိုက်နစ်နာမြ မရြိစေရ။ ထိုအခဵက် ၄ ခဵက်မြာ
၁။ လတ်ြလပ်သောအာရအြသံ၊ အင်တာနက်စာမဵက်ြိာံကို အသုံူးပသြူအနေူဖင့်၊ မိမိကိုယ်တိုင် လိုက်နာပၝမည်ဟု သဘောတူညီထားသော စည်းမဵဉ်းစည်းကမ်းမဵားအား ခဵြိးဖောက်မြ
၂။ လတ်ြလပ်သောအာရအြသံ၊ အင်တာနက်စာမဵက်ြိာံအား သုံးစြဲမြ
၃။ လတ်ြလပ်သောအာရအြသံ၊ အင်တာနက်စာမဵက်ြိာံ Message Boards သိုႛ ပေးပိုႛသော အေုကာင်းအရာ အခဵက်အလက်မဵား၊ သိုႛတည်းမဟုတ် လတ်ြလပ်သောအာရအြသံ၊ အင်တာနက်စာမဵက်ြိာံသိုႛူဖစ်စေ၊ ၄င်းမတြဆင့်ူဖစ်စေ၊ ပေးပိုႛလာသော အေုကာင်းအရာ အခဵက်အလက်မဵား
၄။ ထိုအေုကာင်းအရာ အခဵက်အလက်မဵားအား၊ လတ်ြလပ်သောအာရအြသံကူဖန်ႛခဵိမြ၊ူဖန်ႛဝေမြိံငြ့် အသုံူးပမြ
လတ်ြလပ်သောအာရအြသံအနေူဖင့်၊ မည်သည့် ကိင်္စမဵား၌ အာမခံေုကာင်း၊ တိတိလင်းလင်ူးဖစ်စေ၊ သယ်ြဝိုက်သောသဘေိာံငြ့်ူဖစ်စေ၊ အကန်ႛအသတ် သဘော၊ သိုႛမဟုတ် ယေဘုယဵသဘောူဖစ်စေ၊ တူခား မည်သည့်သဘောတခုခုဖင့်ူဖစ်စေ၊ ဖော်ူပခဲ့သည်မဵား ရြိခဲ့လ္တွင်သော်မ္တွ၊ မည်သည့် အရာကိုမ္တွ လတ်ြလပ်သောအာရအြသံအနေူဖင့်၊ အာမ မခံ၊ တာဝန် မယူေုကာင်း သိစေအပ်ပၝသည်။ လတ်ြလပ်သောအာရအြသံ၊ အင်တာနက်စာမဵက်ြိာံက ဖော်ူပပေးထားသည့် ဝန်ဆောင်မမြဵားသည် အရြိ၊ အရြိအတိုင်းမူဖင့် ပံ့ပိုးပေးထာူးခင်ူးဖစ်သည်။ ၄င်း၏ စာမဵက်ြိာံသည် အူပတ်အလတ် မရြိစေရဟုလည်းကောင်း၊ အမြားကင်းစေရမည်ဟုလည်းကောင်း အာမ မခံပၝ။
လတ်ြလပ်သောအာရအြသံမတြဆင့်ူဖစ်စေ၊ ၄င်း၏ အင်တာနက်စာမဵက်ြိာံပေၞတငြ်ူဖစ်စေ၊ သိုႛမဟုတ် ၄င်းစာမဵက်ြိာံတငြ်၊ ဖော်ူပပေးထားသော တူခား အင်တာနက်စာမဵက်ြိာံမဵားမြ တဆင့်ူဖစ်စေ၊ုကည့်႟ြ နားဆင်ိုံင်သော အေုကာင်းအရာ အခဵက်အလက်မဵား၊ အယူအဆမဵား၊ ထုတ်လုပ်မမြဵား၊ ဝန်ဆောင်မမြဵား၏ အားထားလောက်မြ၊ တိကဵမန်ြကန်မမြဵာိးံငြ့် စပ်လဵဉ်း၍သော်လည်းကောင်း၊ လတ်ြလပ်သောအာရအြသံ၊ အင်တာနက်စာမဵက်ြိာံကို ဝင်ရောက်အသုံူးပမြမြတြဆင့် ပေၞပေၝက်လာသည့် အကဵြိးဆက်မဵာိးံငြ့် စပ်လဵဉ်း၍သော်လည်းကောင်း၊ မည်သည့်အရာကိုမ္တွ လတ်ြလပ်သောအာရအြသံအနေူဖင့် တာဝန်မခံပၝ။ လတ်ြလပ်သောအာရအြသံ၊ အင်တာနက်စာမဵက်ြိာံကို အသုံူးပရြာတငြ် ပေၞပေၝက်လိာိုံင်သည့် ဆိုးကဵြိးမဵာိးံငြ့် ပတ်သက်၍၊ ဝင်ရောက် အသုံူးပသြူ၏ တာဝန်သက်သက်သာူဖစ်သည်။ လတ်ြလပ်သောအာရအြသံ၊ အင်တာနက်စာမဵက်ြိာံကို သုံးစြဲမြ၊ မသုံးစြဲိုံင်မမြတြဆင့် ပေၞပေၝက်လာသော ထိခိုက်နစ်နာပဵက်စီးမမြဵာိးံငြ့် ပတ်သက်၍လည်း၊ မည်သည့်ကိင်္စရပ်မဵြိးမြာ မဆို၊ လတ်ြလပ်သောအာရအြသံ၊ ၄င်း၏ ညနြ်ုကားရေးမြးမဵား၊ အရာရြိမဵာိးံငြ့် ဝန်ထမ်းမဵား၌ တာဝန် မရြိ။ ထိခိုက်နစ်နာပဵက်စီးမမြဵား ဆိုရာ၌၊ တိုက်႟ိုက် မဟုတ်သည့်၊ အကဵြိးဆက်အူဖစ် ပေၞထက်ြလာသည့်၊ အရေးထားလောက်သည့်၊ မထားလောက်သည့်၊ အူပစ်ပေးအရေးယူဖိုႛ လိုအပ်သည်ဟု သတ်မတြ်ိုိံင်သည့် ထိခိုက်နစ်နာပဵက်စီးမမြဵား အားလုံး အကဵြံးဝင်သည်။ မိမိ၏ မူပိုင်ခငြ့် အခဵြိးဖောက် ခံရလ္တွင်၊ ဆောင်႟က်ြရမည့် နည်းလမ်း
လတ်ြလပ်သောအာရအြသံသည် တူခားသူမဵား၏ မူပိုင်ခငြ့်မဵားအား လေးစားအသိအမတြ်ူပသြည်။ လတ်ြလပ်သောအာရအြသံ၊ အင်တာနက်စာမဵက်ြိာံကို အသုံူးပသြော ပုဂ္ဂိလ်ြတဦးတယောက်အနေိံငြ့်၊ မိမိပိုင်အေုကာင်းအရာ အခဵက်အလက်အား မူပိုင်ခငြ့် ခဵြိးဖောက်္ဘပီး၊ ကူးယူ ခိုးခဵခံရသည်ဟု ယုံကည်မတ်ြယူလ္တွင်၊ မူပိုင်ခငြ့်ခဵြိးဖောက်ခံရသည့် ကိင်္စမဵား ဆိုင်ရာ လတ်ြလပ်သောအာရအြသံ တာဝန်ခံထံ၊ အောက်ဖော်ူပပၝ အခဵက်အလက်မဵားကို စာရေးသား၊ ပေးပိုႛ၊ တိုင်တန်းရန်ူဖစ်ပၝသည်။ ၁။ မူပိုင်ရငြ်၏ ကိုယ်စားလယ်ြအူဖစ် အခငြ့်အာဏာပေးအပ်ူခင်း ခံရသော ပုဂ္ဂိလြ်၏ လက်မတ်ြအား စာတိုက်မြူဖစ်စေ၊ အင်တာနက်၊ အီးမေးလ်၊ ဖက်က်စ်တိုႛမြ တဆင့်ူဖစ်စေ ပေးပိုႛရန်
၂။ ပုံတူကူးယူ ခိုးခဵခံရသည့် အေုကာင်းအရိာံငြ့်ပတ်သက်၍၊ မိမိသည်သာ တရားဝင်မူပိုင်ရငြ်ူဖစ်ေုကာင်း အထောက်အထား
၃။ ဥပဒေခဵြိးဖောက်္ဘပီး ပုံတူကူးယူ ခိုခဵခံရသည့်၊ အေုကာင်းအရာ၊ အခဵက်အလက်ကို၊ ဖော်ူပ ပေးပိုႛရန်၊ ၄င်းအူပင် ထိုအေုကာင်းအရာကို လတ်ြလပ်သောအာရအြသံ၊ အင်တာနက် စာမဵက်ြိာံမြ ဖယ်ရြားပေးရန်၊ သိုႛတည်းမဟုတ် ထိုအေုကာင်းအရာအား တက်ရောက်ုကည့်႟ြိုံင်ခငြ့်ကို ပိတ်ပင်ပေးရန် တောင်းဆိုသည့်စာ
ထိုႛအူပင် ၄င်းအေုကာင်းအရာကို၊ မည်သည့်နေရာမြာ ရြာဖေတြေႚရြိုံင်သည် ဆိုသည့်၊ လိုအပ်သည့်၊ လုံလောက်သည့် အခဵက်အလက်မဵား
၄။ ဆက်သယြ်ိုိံင်ရန်အတကြ်၊ တိုင်တန်းသူ၏ လိပ်စာ၊ တယ်လီဖုန်းနံပတ်ိံငြ့်၊ အီးမေးလ်လိပ်စာမဵား
မူပိုင်ခငြ့်ခဵြိးဖောက်ခံရသည့် ကိင်္စမဵာိးံငြ့်ပတ်သက်၍၊ လတ်ြလပ်သောအာရအြသံ၌ တာဝန်ယူဆောင်႟က်ြနေသူ၏ လိပ်စာမြာ contact@rfa.orgူဖစ်သည်။
၅။ ကူးယူခိုးခဵခံရသည့် အေုကာင်းအရာ၊ အခဵက်အလက်ိံငြ့်ပတ်သက်၍၊ ထိုသိုႛူပမြူခင်းသည် မူပိုင်ရငြ်၊ သိုႛမဟုတ် မူပိုင်ရင်ြက တရားဝင် လြဲအပ်ထားသည့် ကိုယ်စားလယြ်၏ ခငြ့်ူပခြဵက် မရပဲူပမြူခင်ူးဖစ်သည် ဆိုသည့်အေုကာင်း၊ ယုံကည်ထင်ရြားလောက်စေသည့်၊ အထောက်အထာိးံငြ့် ရင်ြလင်းခဵက်မဵား
၆။ တိုင်တန်းသူအနေူဖင့်၊ မိမိ၏ တိုင်းတန်းခဵက်ထဲ၌ ဖော်ူပထားသော အခဵက်အလက်မဵား ခိုင်လုံတိကဵမန်ြကန်ပၝသည် ဆိုသောအခဵက်ိံငြ့်တကြ၊ မိမိသည် မူပိုင်ခငြ့် အခဵြိးဖောက်ခံရသော မူပိုင်ရငြ် အစစ်အမနြ်ူဖစ်သည်၊ သိုႛတည်းမဟုတ် မူပိုင်ရင်ြက အခငြ့်အာဏာပေးထားသော ကိုယ်စားလယြ်ူဖစ်သည် ဆိုသောအခဵက်မဵား ပၝဝင်သည့် စာတစောင် တိုင်တန်းသူအနေူဖင့်၊ ၄င်းတင်ူပပေးပိုႛလာသော အခဵက်မဵား၊ မမန်ြကန်ေုကာင်း၊ လိမ်လည်ထက်ြဆိုမမြဵာူးဖစ်ေုကာင်း တြေႚရြိရလ္တွင်၊ တရားဥပဒေအရ အရေးယူ အူပစ်ပေးခံရိုံင်သည် (Under penalty of perjury) ဆိုသော အခဵက်ကို နားလည် သိရြိေုကာင်းလည်း ဖော်ူပရပၝမည်။ အမေရိကန်ိုိံင်ငူံပင်ပမြ နေ၍၊ လတ်ြလပ်သောအာရအြသံ၊ အင်တာနက် စာမဵက်ြိာံ သုံးစြဲသူမဵာိးံငြ့် စပ်လဵဉ်း၍
လတ်ြလပ်သောအာရအြသံ၊ အင်တာနက်စာမဵက်ြိာံသည် အမေရိကန်ူပည်ထောင်စုအတငြ်း၌၊ စီစဉ် ဆောင်႟က်ြနေသော အင်တာနက်စာမဵက်ြိာူံဖစ်သည်။ လတ်ြလပ်သောအာရအြသံ၊ စာမဵက်ြိာံသုံးစြဲသူသည်၊ အမေရိကန်ူပည်ထောင်စုပင်ပကူဖစ်နေလ္တွင်၊ အမေရိကန် ပိုႛကုန် ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေမဵားအပၝအဝင်၊ သက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေမဵာိးံငြ့်အညီ၊ လိုက်လေဵာညီထြေ ဆောင်႟က်ြရန်မြာ၊ သုံးစြဲသူ၏ တာဝန်သာူဖစ်သည်။
လတ်ြလပ်သောအာရအြသံ၊ အင်တာနက်စာမဵက်ြိာံကို သုံးစြဲသူမဵားအနေူဖင့်၊ ပုဂ္ဂိလ်ြရေးအခဵက်အလက်မဵားအား မတ်ြတမ်ူးပြ သိမ်းဆည်ူးခင်း၊ အမဵားသိအောင် ဖော်ထုတ်ူခင်း ဆိုင်ရာမူမဵာိးံငြ့်တကြ၊ အထက်ဖော်ူပပၝ လတ်ြလပ်သောအာရအြသံ၊ အင်တာနက်စာမဵက်ြိာံအသုံူးပြူခင်းဆိုင်ရာ စည်းမဵဉ်းစည်းကမ်းမဵားအား အူပည့်အ၀ နားလည်သဘောပေၝက်သည်ဟု သတ်မတ်ြသည်။ လတ်ြလပ်သောအာရအြသံ၊ အင်တာနက်စာမဵက်ြိာံသုံးစြဲမြိံငြ့် စပ်လဵဉ်း၍၊ ကနဦး ထုတ်ူပန်ခဲ့သည့် အခဵက်အလက်၊ အရေးအသာိးံငြ့်ေူပာဆိုခဵက်မဵား၊ သိုႛမဟုတ်ိံတ်ြအာူးဖင့်သော်လည်းကောင်၊ စာအာူးဖင့်သော်လည်း ထုတ်ူပန်ခဲ့သည့် သဘောပေၝက်နားလည်မမြဵားအားလုံးအား၊ ယခု ဖော်ူပခဲ့သည့် စည်းမဵဉ်းစည်းကမ်းမဵာိးံငြ့် အစားထိုးလိုက်သည်။ ဤ အင်တာနက်စာမဵက်ြိာံ သုံးစြဲူခင်း ဆိုင်ရာ စည်းမဵဉ်းစည်းကမ်းမဵားသည်၊ ကိုလံဘီယာခ႟ိုင် (District of Columbia-D.C) ဥပဒေအောက်တငြ် ရြ္ဘိပီး၊ ထို ဥပဒေအရ အဓိပဍ္ဎာယ် ဖငြ့်ဆို၊ ဆောင်႟က်ြသြားမည်။ မူပိုင်ခငြ့်ခဵြိးဖောက်မြူင်္ပံနာမဵားအား ကိုင်တယ်ြဆောင်႟က်ြရာ၌၊ အမေရိကန်ိုိံင်ငံအတငြ်း လက်တြေႚစီရင်ကဵင့်သုံးနေသည့် ဥပဒေမဵား ရြိနေသော်ူငားလည်း၊ ဒီစီ ဥပဒေိံငြ့်သာ ကိုင်တယ်ြဆောင်႟က်ြသြားမည်။
ဥပဒေ ခငြ့်ူပခြဵက်အရ၊ လတ်ြလပ်သောအာရအြသံ၊ အင်တာနက်စာမဵက်ြိာိံငြ့် စပ်လဵဉ်း၍ူဖစ်စေ၊ ၄င်း၏ စည်းမဵဉ်စည်းကမ်းမဵာိးံငြ့် စပ်လဵဉ်း၍ူဖစ်စေ၊ ပေၞပေၝက်လာသည့် အညင်းပြားမမြဵားအား ဒီစီ နယ်ေူမအတငြ်းရြိ၊ သက်ဆိုင်ရာ တရား႟ုံးမဵား၌သာ စုံစမ်းစစ်ဆေးသြားမည်။ ဤအခဵက်ကို လတ်ြလပ်သောအာရအြသံ၊ အင်တာနက် စာမဵက်ြိာံ သုံးစြဲသူက သဘောတူသည်ဟု သတ်မတ်ြသည်။ အင်တာနက် အသုံူးပြူခင်းဆိုင်ရာ စည်းမဵဉ်းစည်းကမ်းမဵား၏ တစိတ်တဒေသအား၊ လတ်ြလပ်သောအာရအြသံက ပယ်ဖဵက်ူခင်း၊ူပင်ဆင်ူခင်းသည်၊ တူခား စည်းမဵဉ်းအခဵက်အလက်တစိတ်တဒေသကိုပၝ ပယ်ဖဵက်ူခင်း၊ူပင်ဆင်ူခင်း ဆိုသည့် သဘော မသက်ရောက်စေရ။
ဤစည်းမဵဉ်းစည်းကမ်းမဵားထဲမြ စည်းမဵဉ်းတစုံတခုသည်၊ ဥပဒေအရ အာဏာသက်ရောက်မြ မရြိဟု တြေႚရြိခဲ့သည် ရြိသောအ၊ မည်သည့်အေုကာင်ူးပခဵက်ိံငြ့် မဆို၊ ထိုစည်းမဵဉ်းအား အူမင့်ဆုံး ဥပဒေအာဏာ သက်ရောက်စေရန် စီစဉ်ဆောင်႟က်ြသြားမည်။ ကဵန်စည်းမဵဉ်းစည်းကမ်း အားလုံးမြာမူ၊ မူလအတိုင်း ဆက်လက်၍ ဥပဒေအရ အူမင့်ဆုံး အာဏာ သက်ရောက်သည်။ *ယခုစာမဵက်ြိာံအား မိတ်ဆေမြဵားထံသိုႛ အီးမေးလ် ပေးပိုႛစေလိုပၝသည်။ ကွန်မင့်များ
မြန်မာပိုင်းနဲ့ နိုင်ငံတကာ အကုန်တင်စေချင်ပါတယ်
Sep 15, 2012 07:02 PM
ကျွန်တော်၏ http://www.facebook.com/nunn.line?ref=tn_tnmn သို့ သတင်းများကိုပို့ပေးစေလိုပါသည်ခင်ဗျာ ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါကြောင်းပါခင်ဗျာ
Feb 01, 2012 11:00 PM
Jan 07, 2012 09:20 PM